မိန်းကလေးများအဘို့အချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုဓါတ္ပံုမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း - ဗီဒီယိုစကားပြောဖီးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့
ဆုံေ။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက် ။
သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုထက်ပို ၅၆၊၀၀၀၏သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကြော်ငြာများ။ အခမဲ့အားလုံး။ေ ဆိုင်းဘုတ်ပင်မှီသင်မိနစ်အနည်းငယ်အတွက်။ ယခု၊ထိုဆိုဒ်အရှင်ထက်ပို ၅၆၊၀၀၀ ထူးခြားသောကြော်ငြာ။ အလွန်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ပက်သက်သောပေါင်းစည်းရေးအမေရိကန်ကိုအတွက်နည်းလမ်းများကိုနှင့်အဘို့ရှာ။ခေါင်းစဉ်"ကုန်တင်ပစ္စည်းများ"ယနေ့လက်ခံရရှိခဲ့သည်ဒါကြောင့်အများကြီးယုံကြည်စိတ်ချမှုမှဝယ်လက်များ၏ထင်မြင်ချက်၏ကနေဆိုက်၊လူကြိုက်များသောရှာရန်အတွက်ရည်ညွှန်းချက်များ၏နေ့စဉ်အသုတ်။ ကို ၇၅ နှစ်မြောက်အရွက္ၼလင္မ်ား။ အဓိကဖြစ်ရပ်အပေါ်မတ်လ ၉-အကောင်အထည်ဖော် ၏အသက်တာကိုသန့်ရှင်းသောနေ့။ ဒီနေ့တစ်ဦးဘုနျးကွီးမျိုးဆက်၏သူရဲကောင်းများနှင့်အတူအလွန်ကြီးစွာသောဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်အဘို့မာနထောင်လွှားနှင့်အတူအောင်မြင်မှုများကိုမည်သူလူမျိုးအလပ်အဘယ်သူမျှမကြိုးစားအားထုတ်မှုမှဖယ်ရှားပစ်သူတို့၏အမိမြေ၊၊အခမဲ့။ ဖြည့်စွက်ကာ၊ကျွန်ုပ်တို့သည်အစဉ်အမြဲအောက်မေ့သတိရသောအစွမ်းသတ္တိ၏အမှတ်တံဆိပ်သစ္စာကတိပြု၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်များစွာသောအခြား"ဇာတိ"ခလုတ်ကို။ ရပ်တန့်ဖို့ဘယ်လို ။ သုတေသီများကတွေ့ရှိခဲ့ကြဤသည်အားနည်းချက်။ တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်များကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြတစ်ဦးအားနည်းပွဲချင်းပြီးအတွက် ၊ရှိသည့်အသုံးအများဆုံးအပူချိန်မှာ ၉°-ဤရောဂါတွေ့ရှိခဲ့သည်ခံရဖို့အလွန်လွယ်။ မော်စကိုပိတ်ပင်ခဲ့သိရသည်စုလိုက်အပြုံလိုက်အတိုင္းကြောင့်ပြန့်ပွား -၁၉ သို့မဟုတ်အခြားနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများ။ သည်နိုင်ရန်အတွက် ရှောင်ကြဉ်ရန်များပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအသုံးပြုစဉ်ကာလအတွင်းအထွတ်အထိပ်နာရီ၊နှင့်ဖျော်ဖြေရေးစင်တာများဖြစ်လာကြသေးအ ၊အားကြီးသောနောက်နည်း၊ရုရှားတွေချီတက်ရွှေ့ပြောင်း။ ငွေကြေး။ သူအလုပ်လုပ်ခဲ့အဖြစ်သတင်းစာဆရာများအတွက်သတင်းစာနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား၊နှင့်အာရုံကိုဆွဲဆောင်များအပြားဘဏ်များအကြောင်းရှိသည်မကြာသေးခဲ့သိသိသာသာလည္ေမိမိတို့ချေးငွေများ။ နိုင်ငံသား၊ဘယ်သူရေးချွတ်ရန်ပုံငွေများရှေ့ဆက်အချိန်ဇယားပေမယ့်၊သူတို့ကလည်းတက်ကြွစွာသူတို့ကိုအတွက်ဒေါ်လာနှင့်ယူရို။. ထို့အပြင်အတွက်အတည်ပြုအလမ်းကြောင်းသစ်ရှိပါတယ်၊နေ့စဉ်အသိုက်အတွက်ရူ။ အသေးစိတ်အချက်အလက်၊အမြင် ။.
တစ်ဦးထက်ပိုတဲ့ဆက်ဆံရေးအကြောင်းတစ်ဆက်ဆံရေးဟာကိုတည်ဆောက်နည်းနည်း၊ဒါပေမယ့်ပေါ်သောမမြဲခြင်းထိန်းချုပ်ရေး၊အရာတစ်ခါတစ်ရံတွင်မောင်း။ သို့သော်၊စိတ်နှလုံးမှာအမေရိကန်၏၊ငါတို့သိ၊ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲလမ်းညွှန်၊နှင့်အချို့သော အဆိုပါနိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုအဖြားမနေပါနဲ့။ အဆိုပါပြင်းထန်မှုနမ်းပါ၊တစ်ဦးခြော့၊အထူးသဖြင့်နု၊။။။အဲဒီအသေးစိတ်အနှံမကြာခဏအထူးသဖြင့်ပူးတွဲပြီးအစအဦး၏တစ်ဦးထက်ပိုတဲ့ဆက်ဆံရေး။ ထိုအခါကြည့်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ဤပထမဦးဆုံးအချိန်လေးတွင်ဒီနေရာမှာအနည်းငယ်အခြေခံစည်းမျဉ်း။ ဒါဟာသင်ဆုံးမသွန်သင်မည်မဟုတ်၊ရန်မျှော်လင့်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်မိမိအတစ်ဝက်သူလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်သူလိုအပ်မှထွက်ရ! ပင်လျှင်၊ကရင်ဆိုင်ရမယ့်ကြစို့၊ငါတို့ပိုး၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တခါတရံအလွန်အဆင်ပြေအလိုအရှိထှကျလာမှသူ၏နှင်။ ဖြစ်မယ်လို့ပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးမင်းသမီး၊ကက်:'ချစ်ကြည်ရေး၊မေတ္တာ၊အများကြီးကြာ၊အာရုံစိုက်၊၊ဒါကြောင့်လိုအပ်သည်အားလုံးအထက်သိရန်မည်သို့အဘယျသို့ပူဇော်အများဆုံးချစ်အတွက်အသက်:အချိန်!'။ ဒါကြောင့်ထွက်သွားကြ၊ရွှေ့၊ဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိဘဲ၊အောင်က်ား၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်ကိုလည်းကောင်းခံစားရသောပြည့်စုံဖို့တစ်ဦးချင်းကိုဆွဲဆောင်၊နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစည်းအဝေးတစ်ဦးသည်လူသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး။ ယူ၊အချိန်၊ သောက်ပြီးနောက်သင်သည်သင်၏အလုပ်အတွက်ကျောင်းအားကစားအသင်းအဖွဲ့များ၊နှင့်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များပေါ်တွင်(ရှိမရှိအခမဲ့သို့မဟုတ်ပေးဆောင်)၊ဘယ်မှာသင်အခြားသူများနှင့်မျှဝေ။။။ဖြစ်မည့်သားကောင်းပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း။ သည်းခံခြင်း၊၏အဓိကရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖလှယ်ခြင်းနှင့်ကြွယ်ဝဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှာအခြားဖန်တီးသောကြောင့်ဒါဟာအလှဆုံး။ မဖော်ပြထားတဲ့တစ်ဦးထက်ပိုတဲ့ဆက်ဆံရေးကတည်ဆောက်သည်မဟုတ်တစ်ဒင်္ဂအတွင်းတစ်ဦးကိုလက်ညှိုး၊ဒါဟာအချိန်ယူ၊သည်းခံ၊ပြီးဆးထားပါ။ သို့သော်၊အခါတစ်ဦးအလေးအနက်ဆက်ဆံရေးရလဒ်ထွက်နောက်ဆုံးတော့၊သူမကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်တတ်ဒါကြောင့်အများကြီးအတွက်ဆိုလျှင်၊ဤသူအပေါင်းတို့သည်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတန်ဖိုးရှိခဲ့ကြတယ်။ ဤဖြေရှင်းနည်းကိုအတွက်သင့်တော်သည်၊အထူးသဖြင့်သောသူတို့အားပေမယ့်အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အကောင်းအမည်၊အလုပ်အများကြီးရှိသည်မဟုတ်အခမဲ့အချိန်နှင့်သို့မဟုတ်မသက်သာခံစားရစိတ်ကူးနှင့်အတူများ၏ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ဖို့လူသစ်၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အတွက်ကလပ်အစည်းအဝေးဥပမာအားဖြင့်။ မြောက်မြားစွာသောဖြစ်နိုင်ချေများမှာသင်ဖို့ကမ်းလှမ်း၊သင်သည်သင် နိုင်၊ဥပမာအားဖြင့်၊အတွေ့အကြုံဖလှယ်ရေးအပေါ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်။ သင်ကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်သည့်အခွင့်အလမ်းကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အလားအလာမိတ်ဖက်နှင့်အတူအဘယ်သူသင်ဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်းရှိသည်လိမ့်မည်အတူမျှော်လင့်ချက်များအဖြစ်။ သင်ကဲ့သို့ကောင်းစွာအတွက်ဆွေးနွေးတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်နောက်ဆုံးမှထောက်ပြ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအလေးအနက်ဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်ပင်ကိုတွေ့သင်သည်သင်၏စံပြမိတ်ဖက်သို့မဟုတ်သင်သင့်အသက်တာ၏မေတ္တာကို! ဒါကြောင့်မစောင့်ဘူးဆိုပြီး၊အရေးယူသောကြောင့်ဒါဟာသင်အသော့ချက်များ၏အနာဂတ်! တွန့်ဆုတ်ကြဘူးကျေးဇူးပြုဖြစ်ပေါ်စေရန်အပြောင်းအလဲမြင်ချင်သောဖြစ်ပျက်! အတူအနည်းငယ်ရဲစွမ်းသတ္တိ၊စိတ်ရှည်ခြင်း၊ယုံကြည်၊သင်ရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုကြီးမြတ်ရလဒ်များကို။ ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားခြင်းအားဖြင့်သင်တို့အဘို့အရေး၏အလွန်ကောင်းမွန်သောပြင်သစ်ဖတ်ဆောင်းပါးကိုအယ်ဒီဆိုင္ရဲ
လျှင်သင်အမြဲလိုခငျြတော့ဘယ်မှာသိရန်အကောင်းဆုံးနေရာသည်အရှက်ယောက်ျားလေးများ၊ဘယ်မှာသင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါအဆင်းလှသောမိန်းကလေးငယ်များ၊သို့မဟုတ်သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာ၊မိန်းကလေးတစ်ဦး၊ထို့နောက်ဤအရပ်နိုင်အောင်နှိုးဆွ။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်အဘို့ဤအကြောင်းသည်မရှိစေရန်ဖိအားတရားဝင်ဆက်အသွယ်သို့မဟုတ်ကြိုးစားမှရက်စွဲတစ်ခုရရန်။ အီး။ အများဆုံးဖွယ်ရှိ၊သင်တွေ့လိမ့်မည်အလွတစ်ခုတည်းမိန်းကလေးတစ်ဦးတည်းသောအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏သင်လိုချင်တဲ့အတူဆင်းအခြေချရန်သို့မဟုတ်မပါဘဲ။ ခွင:အန်သည်အဘယ်သူမျှမလမ်းအတွက်ရောဂါသို့မဟုတ်ဆေးပညာအတိုင်ပင်ခံ၊နှင့်အသင်အဘို့အတာဝန်ရှိသည်သင့်ရဲ့လုပ်ရပ်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ရလဒ်များကို။ ဒီအသက်ပေတည်း။ တစ်ယောက်ယောက်ျားပေါင်းဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုများအတွက်အကြောင်းသိကောင်းစရာများအမြီး-သြင္းအားဖြင့်လိင်တံအရွယ်အစား။
အဘို့အတက်လက်မှတ်ထိုးအခမဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်စကားပြောခန်း၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ၊လူသစ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်၊အများကြီးပို။ ကနေရွေးချယ်ရာပေါင်းများစွာ၏အွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းပေါင်းအတွက်အထဲမှတစ်အွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းလွယ်ကူပြီးပျော်စရာပါပဲ။ အခြားရွေးချယ်စရာအခမဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်။ အခါအဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့စတင်စကားပြောခန်း၊ပူးပေါင်းချက်တင်အတွက်ပဲငါးစက္ကန့်။ အခမဲ့အစားထိုးစကားပြောခန်းနှင့်ချက်တင်ဆိုက်အပေါင်းတို့အဘို့အဆဲအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ ဒီတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာချက်တင်ပလက်ဖောင်းအစားထိုးချက်တင်။ မှတ်တမ်းအတွက်အစတစ်အွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းသွားဖို့လွယ်ကူပြီးပျော်စရာ။ အခြားရွေးချယ်စရာအခမဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်။ အခါအဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့စတင်စကားပြောခန်း၊ပူးပေါင်းဒါဟာကိုယ့်အတွက်ငါးစက္ကန့်။ အွန်လိုင်းချက်တင်:မှတ်ပုံတင်အခမဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်။ အခမဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းပေါင်း။ ပူးပေါင်းအင်တာနက်ကိုအတွက်အက်စ်အေ၊ဂျာမဏီ၊ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊အာရဗစ္၊ဟော်လန်၊ဥရောပနှင့်အခြားနိုင်ငံများ။ အွန်လိုင်းချက်တင်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံတကာအခမဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်ချက်တင်ကွန်ရက်စာမျက်နှာများအတွက်အမေရိက၊ဂျာမနီက၊အာရဗီနဲ့ပိုပြီးခံစားဖို့အပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ အွန်လိုင်းချက်တင်။
ဘယ်လိုဆောက်လုပ်ဖို့တစ်ဦးဆက်ဆံရေးနှင့်အတူမကြာသေးမီကလင်ကွာသောသူသည်။ ဘယ်လှည့်ကွက်ကိုနားလည်ရန်၎င်းနှင့်ဆက်စပ်အတိတ်၊မဖိ။ ဒီ ဒီဗီဒီယိုမှာ၊ငါပြောမည်အကြောင်းအခြေအနေကကျွန်မမကြာခဏကြုံတွေ့ရအတွက်နည်းပြများ၊အမည်ရ၊သင်ချင်တဲ့အခါဖြားယောင်းသူတစ်ဦးရှိပဲကွာရှင်းနှင့်အတော်လေးအဆင်သင့်ရရန်အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်။ သူခံစားရခုခံကာကွယ်ခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံသင်္ကာ။ သူကကြိုးစားမှအေးအေးဆေးဆေးမိမိအဆင်း၊ဒါပေမယ့်ပုံကသူမစွန့်လွှတ်ချင်ဘဲမိမိယုံကြည်။ ငါ့ရည်မှန်းချက်နားလည်သဘောပေါက်ကူညီသင့်ကွာရှင်းဒါကြောင့်အမှားတွေလုပ်ပြီး၊ဆောင်ခဲ့။၊အများစုအတွက်။ အဆိုပါပိုကြီးပုဂ္ဂိုလ်၊အကြီးသူတို့ပိုပြီးအလိုအခွင့်အလမ်းသူတို့အပြည့်အဝရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်ဇာတ်လမ်းအတွက်။ ထို့ကြောင့်ယခုအချိန်ဖြစ်ပါသည်ဆောက်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနှင့်အတူတစ်ဦးဆက်ဆံရေးတစ်လင်ကွာသောပုဂ္ဂိုလ်၊ဘယ်လိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အနိုင်ရဖို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲနှင့်ဆက်ရှိနေ။ သင်မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါက၊အခမဲ့ခံစားအကြှနျုပျကိုမေးမြန်းဖို့အမှတ်ချက်များအတွက်၊ကျွန်မဖြေဖို့ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။ ဒီတော့ဖို့အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုသွားရောက်ကြည့်ရှုငါ့ဆိုက်။
ရှိမည်သည့်နေရာမှမိန်းကလေးများတွေ့ဆုံရန်အတွက်ဖရန်စစ္စ။ ငါ တစ်ခုတည်းနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းအထီးကျန်အခုတော့အဆင်ပြေကြောင့်ဖြစ်ပါသည်အတူထွက်ဆွဲထားငါ့သူငယ်ချင်းတွေ လက်လွတ်လိင်သိသိသာသာ၊နှင့်လည်းအနည်းငယ်ဖင္သင်နှင့်ပစ္စည်းပစ္စယအခါသင်ရုံကိုကြည့်ရှုရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကို။ ငါဆိုလိုတာကငါဟာကိုယ့်အတွေးနှင့်အတူငါ၏င။ နုတ်ထွက်ဆွဲထားနှင့်အတူသင့်ရဲ့အရင်းအပေါင်းတို့သည်အချိန်ထွက်သွားဖို့အချို့ကိုပြသသို့မဟုတ်အလည်အပတ် အချို့အနုပညာပြခန်း၊အယူအတန်းအစား။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်းအမိုင်း။ ထိခိုက်မှုမရောက်သေး၊အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊နှောင့်ယှက်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးအချက်ကျူးကျော်၊ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ရှေ့၊လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ် ၊ထိခိုက်မှုမရောက်သေး၊အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊နှောင့်ယှက်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးအချက်ကျူးကျော်၊ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ရှေ့၊လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ် ၊ထိခိုက်မှုမရောက်သေး၊အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊နှောင့်ယှက်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးအချက်ကျူးကျော်၊ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ရှေ့၊လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ် ၊သင်သည်အဘယ်သို့ထင်ကြဘူးစားသောက်ဆိုင်များ၏အမည် ။ စားသောက်ဆိုင်အမည်အတွက်ဖရန်စစ္စ။ အ ၊အမှတ်? အဘယျသို့မည်အဖိုးစားသောက်ဆိုင်သင်အများဆုံး? ဒါမှမဟုတ်ဦးလေးဖိုး။ စားသောက်ဆိုင်အမည်အတွက်ဖရန်စစ္စကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရိုင်။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင် ။ တာဝန်ခံအခမဲ့ပါဘဲ။
ကျွန်မရှင်တို့ကိုကတိပေးတယ်ျဖင့္ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအဘို့အသင့်ငြီးငွေ့ပဳႏိုင္ရန္ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ကျွန်တော်မသေချာလျှင်သင်ကြီးမားသော၊ဒါပေမယ့်ငါသေချာပါတယ်သင်ကြိုက်ပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ဝင်စားလျှင်၊တွေ့ဆုံပြီးကျွန်တော်တို့၏မေတ္တာကိုဖြစ်စေတော်မူမည်။ ပူးပေါင်းအကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့ဆိုက်အစဉ်သို့မဟုတ်။ သင့်ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အသင့်ရဲ့ဧရိယာသို့မဟုတ်ကမ္ဘာအနှံ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များသာအခ်က္အလက္မ်ားျပမ်က္ႏွာျပင္မှန်တကယ်ပရိုဖိုင်း။ ကျနော်တို့ကျော်ရှိသည် ၃၀၊၀၀၀၊၀၀၀။ သောင်းချီသောလူများ၏ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အဆက်မပြတ်အွန်လိုင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာရှင်လည်း ဒါဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော၊ဂိမ်း၊စမ်းသပ်မှုများ၊ဒိုင်ယာ၊ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့နှင့်မိုဘိုင်းဗားရှင်းများချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်စမတ်ဖုန်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များများမှာလွယ်ကူသောကြည့်ရှုရန်၊ပြည်တွင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း။ ငါတို့ပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအလက်တွေရဲ့လုံခြုံရေးသေချာစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးယူမက်ဆေ့ခ်ျများလွန်အလေးအနက်။ ဒီအထဲကစစ်ဆေးလုံးဝအခမဲ့ ။ ပွင့်သတ်မှတ်ဒေသခံတစ်ဦးကော်ဖီဆိုင်အကြောင်းပြုလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်နားလည်ရန်ခက်သောရည်မှန်းချက်ကိုမျှဝေဖို့ဘုံအကျိုးနှင့်အတူသူတို့အားတွေ့ဆုံရန်သောသူ။ ဒါဟာအများမေးမြန်းဖို့ကောင်းတဲ့အိုင်ပတ်ပတ်လည်အထိအမျိုးသားတွေစောင့်ကြည့်လေ့လာကြရှိမရှိအမျိုးသမီးတွေကိုက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနီးသို့မဟုတ်ကမ္ဘာအနှံ့။ အရည်အသွေးမြင့်ကၽြႏ္ုပ္တိုချိန်းတွေ့ဒေတာဘေ့စအသက်ရှင်သောအတွက်ရုရှား၊ များနှင့်ထက်ပို ၂၀၀ ကမ္ဘာတဝှမ်းနိုင်ငံပေါင်း။ လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ဟာအပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်ဟုခေါ်သည်။ အတူနောက်လူမှတစျနေ့က၊နက်ဖြန်နေ့ဖြစ်လိမ့်မည်ပိုကောင်း။ ကြည့်ရှုရှာဖွေရေးပုံစံကို:အမျိုးသားအမျိုးသမီးလေး:အမျိုးသမီးလူလူလူ: -မော်စကိုတွင်၊ ရုရှားနိုင်ငံ။
ဣသရေသည်တစ်နိုင်ငံမှာလူအများအပြားနေထိုင်၊အဘယ်သူသည်ယနေ့အချိန်တွင်ဆိုင်မှကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးစုများ။ ထို့ကြောင့်အစ္စရေးစကားပြောသည်ရှိရာပလက်ဖောင်း။ စကားပြောဣသရေရှိသည်ပါဘူးတစ်ခုအသက်အရွယ်ကန့်သတ်။ ဒါဟာတူညီတဲ့နည်းလမ်း ဒါဟာအတွက်သင့်တော်သည်၎င်း၏အသုံးပြုသူများနှင့်ရှာနေသူမည်သူမဆိုများအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူရင့်ကျက်မိတ်ဖက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဖော်ကိုယ့်အဖြစ်ကိုအလွယ်တကူအဖြစ်သူတစ်ဦးသည်ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားနေနှင့်အတူ။ ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာကိုဖြည့်ဆည်း၏လူဣအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ကိုယ့်ကိုနှိပ်ပါ"စတင်"ခလုတ်ကိုနှင့်သင်မြင်ရပါလိမ့်မည်။ သင်တွေ့ဆုံရန်တစ်စုံတစ်ဦးမှဣ? လွယ်ကူဘာမှမ။ ဤသည်တတ်နိုင်သမျှဒီနေ့အခုအချိန်မှာ။ သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးသည်ဖြစ်ပါသည်ရွေးအစ္စရေးကနေနိုင်ငံတွေရဲ့စာရင်းနဲ့သင်စကားပြောနှင့်အတူ။ အတွက်ဖော်ရွေအွန်လိုင်းချက်တင်၊သင်အလျင်အမြန်ရှာတွေ့ကောင်းသောအ။ မျှဝေသင့်ရဲ့လူမှုမီဒီယာပရိုဖိုင်ကိုလင့်ခ်နှင့်အတူမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်နှင့်မိတ်ဆွေဟောင်းမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်။ စကားပြောဣအခမဲ့ချက်တင်နှင့်အတူစကားဝိုင်းတစ်ခုတည်းမိတ်ဖက်ရွေးချယ်မှုစနစ်။ တစ်ခုရှိသည်မပါဘူးမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ကိုယ့်အလှည့်တွင်ကမ်စတင်။ ဒီဘက်ပါ၊သင့်ရဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်သင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်။ အစ္စရေးလူတွေကမကြာခဏပြောမှာအနည်းငယ်ပြင်းအသံ၊အာရုံစိုက်၊ဒါကြောင့်ကိုယ့်သူတို့ရဲ့စတိုင်၏။ အတူအစ္စရေးလူတွေကိုသင်နိုင် အဆိုအရမ်းစပ်စုကြသည်နှင့်အလွန်အချိန်မှန်။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းအားနည်းချက်များ၏ နှင့်အဘို့ပြင်ဆင်ရမည်။ ပြောနေတာအတွက်အွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းဣလိမ့်မည်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံ။ သင်တွေ့လိမ့်မည်အချက်အလက်တွေအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအမှုအရာမြင်မှတိုင်းပြည်အတွက်၊အထူးဒေသခံဟင်းလျာများသို့မဟုတ်ဥပမာ၊ဘယ်လိုပျော်မွေ့ရန်အတွက်ရေကူးသေပင်လယ်။ ခြွင်းချက်အမှုများသောအခါ၊ဗီဒီယိုစကားပြောယန္တရားမရနိုင်ကောက်မှလူဣသရေ၊အဆိုပါစနစ်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုသင်ဆက်သွယ်ဖို့တခြားနိုင်ငံတွေထဲကနေလူဦး။ ကျွန်တော်မသွားပါစေလိမ့်မယ်သင်ပျင်းရ။ သင့်ရဲ့ကံကြိုးစားပါနှင့်လက်တွဲဖော်ကိုရှာဖွေတဲ့အခါတိုင်းဒီဆိုဒ်၊သင်တွေ့လိမ့်မည်အသစ်အစည်းအဝေးတွေ၊စိတ်ဝင်စားစရာအသိအကျွမ်းနှင့်အများကြီးဆက်သွယ်ရေးအတွက်ဖော်ရွေလေထု။ အဘယ်သူမျှမပျင်းပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်၊သင်ထူထောင်နိုင်ချက်တင်နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဒေသခံများအထူးသဖြင့်မြို့။ ဥပမာအားဖြင့်၊လူကြိုက်အများဆုံးအစ္စချက်တင်အတွက်ဂျေရုဆလင်။
မင်္ဂလာပါ၊ငါ့ပေါက်။ မကကျွန်တော်တို့သွားဖို့ ၊ဒါပေမယ့်အစားအ ၊ငါအသိအပြောင်းအလဲ။ ဒါပေမယ့်အပြောင်းအလဲအတွက် ပြောပြၽြန္ုပ္၏တဦးတည်းအရာဤအတူစာပိုဒ်တိုများ:မင်္ဂလာပါ။ ယခု၊နောက်ဆုံးတော့၊အကောင်း ဆာင္းပြည်၌အဟမ်နှင့်သေနတ်များ၊ဟုတ်ကဲ့၊ကျွန်တော်သိသည်သင်တွေ့ရှိပြီးဟုတ်။ အကောင်းနှင့်အတူ ၊ရုရှားသို့မဟုတ်အမေရိကန်၊စစ္အာဂၤငါ့ပေါက်ဤခရစ္စမတ်ကြိုးစားပါလိမ့်မည်ဖယ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုများရုံသင်တို့အဘို့အ။ လျှင်စမတ်၊ငါမြင်ရပါလိမ့်မယ်၊လျှင်ငါတူးနိုင်အနည်းငယ်တက်ဝတ်စုံသင်ပျော်ရွှင်စေ၊လွန်း။ ရိုက်နှက်မှုအကြောင်းဗီဒီယိုကိုနေ့ပီးေချက်တင် ။ ငါကြီးမားတဲ့ပရိတ်သတ်ဘူး၏၊ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကမ္ဘာကြီးဟာအရမ်းကြီး၊ကျွန်တော်ထင်တယ်လူအ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်အကြှနျုပျအနည်းငယ်ပေါက်။ ဒါဟာအတော်လေးဖြစ်နိုင်သည်အချို့အသေးစားအသုတ်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရိုက်ကူးဖို့အပေါ်တိုက်ရိုက် ။ ကောင်းသောသူတို့အဘို့မသိရပါဘူး ကအတူတူဖြစ် ၊ဒါပေမယ့်ချွေး၊နှင့်ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်လမ်းလျှောက်နိုင်သည်ကိုလုံးဝအချည်းစွန့်ခြင်းမရှိဘဲတက်သော့ခတ်ခံရတိုင်းသုံးစက္ကန့်။ဟုတ်ကဲ့၊ကျွန်တော်သိသည်အေး၊ဒါပေမယ့်အကောင်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဝေးနည်းပါးလာမိန်းကလေးများထက်သောအခါထွက်ဆွဲထား ဖန်တီးခြင်းတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအ ရှိကြောင်းထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်နှင့်အလွယ်တကူဆက်သွယ်မိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူကမ္ဘာအဝှမ်းကနေတဆင့်ကမ်။ တကယ်တော့၊လက်ရှိတွင်ရှိပါတယ်ပိုပြီးအသုံးပြုသူများ၏မူရင်းကို ၊ကျနော်တို့ကြီးထွားလာကြသည်ထက်မဆိုပိုပြီးမြန်ဆန်အွန်လိုင်းချက်တင်ဆိုက်အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများငါးကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများရှိသည်ဖို့တစ်ဦးကိုကျပန်းချက်တင်၊အားလုံးအရာ၏လုံးဝအခမဲ့နှင့်အနိုင်ပေး၏နာရီ။ ဖန်တီးခြင်းတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအ ၊ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်နှင့်အလွယ်တကူဆက်သွယ်ဖို့မိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူကမ္ဘာအဝှမ်း ကနေတဆင့်တစ်က်ဘ်ဆိုက်။ တကယ်တော့၊လက်ရှိတွင်ရှိပါတယ်ပိုပြီးမူရင်း သုံးစွဲသူများ၊နှင့်ကျနော်တို့ကြီးထွားလာကြသည်ထက်ပိုမြန်မဆိုအခြားအွန်လိုင်းချက်တင်ဆိုက်အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများငါးကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများရှိသည်ဖို့တစ်ဦးကိုကျပန်းချက်တင်၊အားလုံးအရာ၏လုံးဝအခမဲ့နှင့်အနိုင်ပေး၏နာရီ။ ဖန်တီးခြင်းတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအ ၊ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်နှင့်အလွယ်တကူဆက်သွယ်ဖို့မိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူကမ္ဘာအဝှမ်းကနေတဆင့်ကမ်။ တကယ်တော့၊လက်ရှိတွင်ရှိပါတယ်ပိုပြီးမူရင်း သုံးစွဲသူများ၊နှင့်ကျနော်တို့ကြီးထွားလာကြသည်ထက်ပိုမြန်မဆိုအခြားအွန်လိုင်းချက်တင်ဆိုက်အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများငါးကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများရှိသည်ဖို့တစ်ဦးကိုကျပန်းချက်တင်၊အားလုံးအရာ၏လုံးဝအခမဲ့နှင့်အနိုင်ပေး၏နာရီ။ ဖန်တီးခြင်းတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအ ၊ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်နှင့်အလွယ်တကူဆက်သွယ်ဖို့မိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူကမ္ဘာအဝှမ်းကနေတဆင့်ကမ်။ တကယ်တော့၊လက်ရှိတွင်ရှိပါတယ်ပိုပြီးမူရင်းမြားထွက်ရှိ သုံးစွဲသူများ၊နှင့်ကျနော်တို့ကြီးထွားလာကြသည်ထက်ပိုမြန်မဆိုအခြားအွန်လိုင်းချက်တင်ဆိုက်အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများငါးကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများရှိသည်ဖို့တစ်ဦးကိုကျပန်းချက်တင်၊အားလုံးအရာ၏လုံးဝအခမဲ့နှင့်အနိုင်ပေး၏နာရီကျပန်းချက်တင်။ ဖန်တီးခြင်းတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအ ၊ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်နှင့်အလွယ်တကူဆက်သွယ်ဖို့မိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူကမ္ဘာအဝှမ်းကနေတဆင့်ကမ်။ တကယ်တော့၊လက်ရှိတွင်ရှိပါတယ်ပိုပြီးမူရင်း သုံးစွဲသူများ၊နှင့်ကျနော်တို့ကြီးထွားလာကြသည်ထက်ပိုမြန်မဆိုအခြားအွန်လိုင်းချက်တင်ဆိုက်အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများငါးကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများရှိသည်ဖို့တစ်ဦးကိုကျပန်းချက်တင်၊အားလုံးအရာ၏လုံးဝအခမဲ့နှင့်အများအတွက်အသုံးပြုနိုင်မှာနာရီပေါင်းများစွာအချိန်
အရာကိုလုံလောက်စွာဆက်သွယ်ဖို့ဘာကမဖြစ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ချမ်းသာနေမှလူများအပေါင်းတို့သည်သင်တို့၏မြို့၏အချေ-။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူအဖို့ကျေနပ်ဖို့သင်ကြိုဆိုပါတယ်စာလုံးပေါင်း-အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့ဆိုက်အဘယ်မှာရှိသင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ အဒီလူသစ်၊ဤတစ်သာယာသောစကားပြောဆိုသို့မဟုတ်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ ဇာတိနေအိမ်များ၌ကြွယ်ဝသောသမိုင်းနှင့်အထူး။ ယခု၊ထိုဆိုဒ်ကမ်းလှမ်းချက်များအားလုံးသည်အဆိုပါအင်္ဂါမည်သူမဆိုအလွယ်တကူစစ်ဆေးရှိမရှိသင်အသစ်တစ်ခုကိုကျွမ်းသို့မဟုတ်မချက်ကိုယူပြီးအားဖြင့်ဤဆုကြေးဇူး၏။ အဓိကအားသာချက်တစ်ခုရှိကြောင်းကြီးမားသောပရိသတ်ကို၏ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များတွင်စာလုံးပေါင်း။ အဘယ်အရာကိုဆွဲဆောင်သင်သည်လူတစ်ဦးရှိကြောင်းအသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆွေသင့်အဘို့အကြည့်ဖို့ဒီမှာ။ ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းသိမှရသင့်ပတ်လည်ကလူ။ သင်အဆင်ပြေရွေးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နှင့်အချို့သောမြန်မာဘာသာအပေါ်မူတည်။ ရအောင်ဒီဝါသနာစနစ်၊နှင့်အတူ အဆိုပါသတင်း၏ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူဘုံအကျိုးစီးပွား။ ဖြစ်နိုင်ခြေအများရှာဖွေခြင်းတစ်ဖက်ကန့်သတ်ကြသည်မဟုတ်။ ဆက်သွယ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူသူအင်တာနက်အသုံးပြု၊ဆက်လက်သံသယမရှိဘဲ၊အချိန်ဖြုန်း။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူသဘောအကြည်၊ရည်ရွယ်ချက်၊ခြင်းနှင့်ပွင့်လင်းယုံကြည်သောသူမည်တိုးတက်နိုင်ပါလိမ့်မည်၊ဥပမာအားဖြင့်၊ရောက်တဲ့အခြေခံကျကျအဆင့်သစ်၏။ လူတိုင်းထင်ကြောင်းဒီအဖြစ်အပျက်၊တိုးတက်မှု၏လူ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်လာသည်အများကြီးပိုကောင်း။
ဒါဟာပုံမှန်ငါရှိသည်သောအရပ်မြတ္စမိန်းကလေးနှင့်ကျွန်မဝတ်ဆင်က်ာ္သက္(ဝါပေါ်ငါ၏ဦးခေါင်း)။ သို့သော်အဆိုပါအရာသည်၊ငါသာဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အဖြူယောက်ျားတွေ။ အဓိကပြဿနာသည်အဖြူ၊အမျိုးသားများအတွက်နိုင်လိမ့်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်အနီးကပ်ရရှိရန်။ ကျွန်မအထင်သူတို့ကြောင့်ထင်တယ်သိပ်မကပ်ဖို့ငါ့ကိုယ်ပိုင် ။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ထင်မိပါဘူး။ ငါမသိဘူး။ အာရပ်လူတွေအမြဲငါ့ကိုအနှိုးဆျောနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အနက်ရောင်ပါဘူးဆျောငါ့ကိုလည်းအများကြီး၊ဒါပေမယ့်ကျွန်မမရောက်သူတို့ကိုမှပူးတွဲပါ။ ဒီအမှန်တကယ်အဖြူအမျိုးသားများအဆင်းလှသောအမျိုးသမီးအတွက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှမြောက်အာဖရိက၏။ ဒါကြောင့်အကယ်။၊သူတို့အစဉ်အလာ? ငါဘယ်လိုသိစေကျွန်မသူတို့ကိုဂရုစိုက်ဖြစ်ခြင်းမပါဘဲလည်းသိသာ? ဒါ့အပြင်၊သူတစ်ဦးအစွန်အဖျားအရပ်နိုင်ဦးနှင့်တွေ့ဆုံ။ ငါအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ကြိုးစားနေ၊ဒါပေမယ့်ကျွန်မရဲ့နောက်ဆုံးအမြော်လင့်။ ငါသည်လည်းကြောင်းသတိပြုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်နှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများဥရောပ၊ ချိန်းတွေ့အများကြီးပိုဘုံထက်အခြားနိုင်ငံများအတွက်။ အဖြူယောက်ျားဟန်မထွက်ရောက်ရှိဖို့မှအမျိုးသမီးအခြားယဉ်ကျေးမှု။ ဒီပဲင့္ၾလျှင်၊ငါသည်အဖြစ်နိုင်မှား။ သို့သော်၊အချို့သောအကြံပေးချက်များသို့မဟုတ်အလားတူအတွေ့အကြုံကြိုဆိုနေကြသည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ဒါဟာပုံမှန်ငါရှိသည်သောအရပ်မြတ္စရည်းစား ငါအက်ာ္သက္(ဝါပေါ်ငါ၏ဦးခေါင်း)။ သို့သော်အဆိုပါအရာသည်၊ငါသာဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အဖြူယောက်ျားတွေ။ အဓိကပြဿနာသည်အဖြူ၊အမျိုးသားများအတွက်နိုင်လိမ့်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်အနီးကပ်ရရှိရန်။ ကျွန်မထင်တယ်ထင်သောကြောင့်သူတို့ကကျွန်တော်လည်းဘာသာရေးသို့မဟုတ်ပဲကပ်ဖို့ငါ့အမျိုးအစား။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ထင်မိပါဘူး။ ငါရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ ဒါဟာအဆင်ပြေမယ့်ငါရှိသည်သောအရပ်မြတ္စရည်းစားနဲ့ကျွန်မဝတ်ဆင်က်ာ္သက္(ဝါပေါ်ငါ၏ဦးခေါင်း)။ သို့သော်အဆိုပါအရာသည်၊ငါသာဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အဖြူယောက်ျားတွေ။ အဓိကပြဿနာသည်အဖြူ၊အမျိုးသားများအတွက်နိုင်လိမ့်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်အနီးကပ်ရရှိရန်။ ကျွန်မထင်တယ်ထင်သောကြောင့်သူတို့ကကျွန်တော်လည်းဘာသာရေးသို့မဟုတ်ပဲကပ်ဖို့ငါ့အမျိုးအစား။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ထင်မိပါဘူး။ ငါမသိဘူး။ အာရပ်လူတွေအမြဲငါ့ကိုအနှိုးဆျောနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အနက်ရောင်ပါဘူးဆျောငါ့ကိုလည်းအများကြီး၊ဒါပေမယ့်ကျွန်မမရောက်သူတို့ကိုမှပူးတွဲပါ။ အဖြူရောင်ကောင်လေးအမှန်တကယ်အောင်လှပသောအမျိုးသမီးများထဲကအရှေ့အလယ်ပိုင်းမြောက်အာဖရိက။ ဒါကြောင့်အကယ်။၊သူတို့အစဉ်အလာ? ငါဘယ်လို သူတို့အားသိစေကျွန်မသူတို့ကိုဂရုစိုက်ဖြစ်ခြင်းမပါဘဲလည်းသိသာ? ဒါ့အပြင်၊သူတစ်ဦးအစွန်အဖျားအရပ်နိုင်ဦးနှင့်တွေ့ဆုံ။ ငါအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ကြိုးစားနေ၊ဒါပေမယ့်ကျွန်မရဲ့နောက်ဆုံးအမြော်လင့်။ ငါသည်လည်းကြောင်းသတိပြုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်နှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများဥရောပ၊ ချိန်းတွေ့အများကြီးပိုဘုံထက်အခြားနိုင်ငံများအတွက်။ လူဟန်အဘယ်သူမျှမပြဿနာချဉ်းကပ်ကနေအမျိုးသမီးအခြားယဉ်ကျေးမှု။ ဒီပဲင့္ၾလျှင်၊ငါသည်အဖြစ်နိုင်မှား။ သို့သော်၊အချို့သောအကြံပေးချက်များသို့မဟုတ်အလားတူအတွေ့အကြုံကြိုဆိုနေကြသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊သင်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်အဖြူအဘယ်သူသည်ပြီးသားဖြစ်ချင်မြတ္စသွားဖို့ဆွံ့အ။ အများကြီးရှိပါတယ်အဖြူမြတ္စယောက်ျားဆိုတာရှိပါတယ်။ ဒါဟာမည်မဟုတ်ခက်ခဲရှာတွေ့သင်တို့အဘို့လင်သောကြောင့်၊သူတို့ထဲကအများစုဟာ။ ငါမြတ္စ၊အာရှ၊ငါတွေ့တာကစ်အမျိုးသားများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအပြေးပြိုင်ပွဲ။ ဒါပေမဲ့ကျွန်မမရယ်စိုးရိမ်မိငါ့အနာဂတ်ပြိုင်ပွဲခင်ပွန်း။ အကယ္၍တူညီသောအပြေးပြိုင်ပွဲ၊ငါလက်မခံဘဲတိုင်ကြား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊အကောင်းကံနှင့်အတူသင့်ရဲ့ရှာဖွေရေး သင့်ရဲ့အနာဂတ်အဖြူရောင်လင်။ ကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်အာရပ်မိန်းကလေးများ။ ငါသည်အသက်ရှင်သောအနီးၼစ္ငါတွေအများကြီးတွေ့မြင်။ ငါသွားဖို့ကောလိပ်များရှိခဲ့သည်ဖြစ်ကောင်းသူတို့ထဲကအများစုဟာ။ ငါပြောသောအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်ခက်ခဲကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ကစတင်ရန်ဘယ်မှာသိ။ ကျနော်တို့မသိရပါဘူးလျှင်လတ်ဆတ်သောချဉ်းကပ်ဖို့ထက်အခြားအရာတစ်ခုခု ။ အဘို့အချိန်းတွေ့ခြင်းသို့မဟုတ်လိင်ဆက်ဆံ-အာရပ်မိန်းကလေးများ။ ကျွန်မတကယ်မသိကြဘူးကြောင်းလုံလောက်အယဉ်ကျေးမှုကိုနားလည်ရန်။ ကျွန်တော့်အတွက်၊ငါအနုပညာနှင့်ဂီတ။ ငါလမ်းလျှောက်ဖို့ငါအသိငါအရက်သောက်ချင်ရင်ငါလည်းခိုးဆေးခြောက်၊ငါပြုချင်ကြပါဘူး။ အဆိုပါအရာကတော့သုံးဖို့လုံလောက်တဲ့နားလည်သောအာရပ်ယဉ်ကျေးမှုမတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူ။ ငါဟာအရှုံးသမားသို့မဟုတ်အရှုံးသမား။ ငါအစားထိုးသင္ၾ၊ေလးပ၊ကစားဂီတဥယျာဉ်နှင့်ဥယျာဉ်တော်၌အလုပ်၏အများကြီးအမှုအချက်ပျော်စရာကောင်းပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ အမကတော့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်နဲ့အညီတစ်ဦးအာရပ်မိန်းမ? ငါအရမ်းစပ်စုတယ်။ ငါသည်မသိရပါဘူး၊အားလုံးရပ်၊သူတို့အများစုဟာအခုကြောက်နေကြပါတယ်အေနနှင့်၎င်းတို့၏။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ငါအသိဆွေမျိုးအဘယ်သူသည်လက်ထပ်ပြီးအလွဴခဲ့သူအရမ်းကြင်နာခင္ဗ်ာ။ ဒါပေမယ့်ထို့နောက်သူကစတင်ဆက်ဆံနှင့်သူမ၏ကွဲပြားခြားနားမနေခဲ့ပါခွင့်ပြုသူ့အထဲကသွားကြဖို့တယောက်တည်းသူမ၏မေးရန်ဝတ်တဲ့မျက်နှာဖုံးနှင့်မတင်သူမ၏ထိုင်စားပွဲ၌လူတို့နှင့်အတူ။ ကျွန်တော်သိသည်အားလုံးမရပ်ဆိုးများမှာ၊ဒါပေမယ့်အများအပြားမိန်းကလေးများကြောက်နေကြတယ်ထိုကဲ့သို့သောပုံပြင်များ။ ငါအတွေ့အပြားအဆင်းလှသောအမျိုးသမီးထံမှအရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်မြောက်အာဖရိက။ သို့သော်အများစုမှာမိန်းကလေးများ၏အတွက်နောက်ခံအရောင်လေ့ရှိသည်ဖို့အလွန်တင်းကျပ်သော၊ဘာသာရေးအလွန်မိဘများနှင့်မောင်နှသူသည်ငြင်းဆန်ထားခဲ့ဖို့သူတို့သမီး၊ညီအစ်မအားပေးတော်မူသောဇာတိဥေယောက်ျားလေးများ(မလြန္)၏ပင်လျှင်၊သူတို့သည်အသက်ရှင်အတွက်ငါတို့နိုင်ငံ။ လျှင်သင်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်၊ကျွန်မဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အေပါင်းအရာဖြစ်ဟန်ချက်။ လွန်းများစွာသောပြဿနာများနှင့်လည်းအများအပြားယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားခြားနားမှု၊ရိုးသားဖို့။ လျှင်သင်၏နားကြားငြီးငွေ့၏မိတ်ဆွေများနှင့်တိုင်ကြားဘဲအချိန်တွဲဖော်၊ပြီးတော့ဒါဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊အဆိုပါစာအုပ်၏မယ်တော်ဆေးခန်း တစ်ခုစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်လွဲမှားသောအားဖြင့် ရုပ်ရှင်၊တစ်သက်ပန်ဆရာဂြိုလ်ပေါ်အချစ်ဇာတ်လမ်း၏။ သူဆွဲလှုံ့ဆော် အသက်တာ၌၊နှင့်အတူရင်ဆိုင်စဉ်ဆက်မပြတ်မိန်းကလေးများနှင့်အတူပြဿနာများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးတစ်ဦးဟာဗျူဟာအဘို့အဘယ်သို့ပြုပြင်ဖို့၊ဒါပေမယ့်ပြီးနောက်ဤပုံမှန်ကျရှုံးဖို့ဆွဲဆောင်၊သူတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအဘယ်သူမျှမနေစဉ်၊သူမသိခဲ့ပါဤပစ္စည်းများကိုဆုံးဖြတ်အသိအမှတ်ပြုရန်အခြေအနေ၊သူအကြောင်းတွေ့ရှိသူသည်မပြုခဲ့ကြောင်းစဉ်းစားအဘယ်သို့ပြုရမည်မဟုတ်။ နှင့်ခက်သောအခါသင်ကအားလုံးကိုဖုံးလွှမ်းနှင့်လည်းကျိုးနွံ။ လူမလွန်ဖို့စိတ်ဝင်စားသူအမျိုးသမီးအဖုံးဖွင့်အပေါင်းတို့သည်အချိန်။ နှင့်ဟုတ်ကဲ့၊အမျိုးသားကိုမကြိုက်ကြပါဘူးဘာသာရေးလူတွေအများကြီးတင်ပါတယ်။ သငျသညျဆိုပါကကစား၊ဂရုတစိုက်ဘယ်တော့မှသောမိန်းကလေး။ အမျိုးသမီးတန်ဖိုးယုံကြည်မှု၊ရဲစွမ်းသတ္တိ၊ဇွဲ။ ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုယူ။
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါမ်ိဳးမွတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊အဘယ်မှာသင်နိုင်အောင်ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူနိုင်ငံခြားရပ်။ ဘယ်မှာသင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါနိုင်ငံခြားရပ်ကနေတဆင့်ကျပန်းဗီဒီယိုစကားပြော။ အခါသင်ဝင်ရောက်ဖို့မ်ိဳးမွစကားပြော၊သင်ချိတ်ဆက်ထားလိမ့်မည်ကိုအမည်မသိလူတစ်ဦးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျပန်းကိုး။ အဖူးအတွေ့အကြုံ၏ ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူတစ်ခုတည်းအီယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ၊အခမဲ့အရပ်နှင့်အတူစကားပြောကင်မရာကင်မရာပေါ်မှာ၊အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အတူင္ငံျခားသားမ်ား၊ကျပန်းစကားပြောနှင့်အတူအရပ်မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများ၊ပရောပနှင့်အတူစကားပြောရပ်မိန်းကလေးများမကျြနှာကိုမှမျက်နှာ။ ပေးစေခြင်းငှါအလိုအလျောက်စကားပြောအတွေ့အကြုံ၊စေပြီးစကားပြောနှင့်အတူအသုံးပြုသူများမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲမပါဘဲ။ ဤသည်အကောင်းဆုံးအခမဲ့အခြားရွေးချယ်စရာအာကစားတဲ့စကားပြောမှ ။ -စိမ်းဖစ္သျဗီဒီယို ချက်တင်နှင့်အတူကျပန်းတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့ပြေ၊၊အတည်းနှင့်အတူစကားပြောကျပန်းတကျွန်းတနိုင်ငံသား-ဦးကြိုပြုခြင်း၊စကားပြောမိတ်ဆွေများနှင့်အမည်မသိအောင်အွန်လိုင်းချက်တင်ကမ်အစိမ်း-အမည်မသိအွန်လိုင်းချက်တင်။
သည်နှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းဇယားများအရ၊ထက်ပို။၈၅ သုံးပြုသူဆက်သွယ်မှာအနည်းဆုံး ၃ နာရီတစ်ရက်။ ဤအသုံးပြုသူများနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါတယ် ၁။ ကလပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှု။ လက်ရှိယူျကြေး:၁-တစ်နေ့အ၆၅။၀၀ရူႏွရုံးတင်စစ်ဆေးကာလ*၁ လ-၂၁၀၀။၀၀ ရူတစ်ပတ်လျှင် ၆၅၀။၀၀ ရူႏွရုံးတင်စစ်ဆေးကာလ။ ပထမနေ့၏တဦးတည်း-နေ့ကရုံးတင်စစ်ဆေးကာလအတွင်း ၆၅ ရူ၊ထို့နောက်စာချုပ်တိုးချဲ့ဖြစ်ပါတယ်၊တလအပြီးငွေပေးချေမှုလုပ်လိမ့်မည် ၂၄ နာရီတစ်ရက်။ သင်ရပ်ဆိုင်းနိုင်၊အပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်"ဖျက်သိမ်း"ခလုတ်ကိုအတွက်အသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုသဘောတူညီပရိုဖိုင်း။.
လေယာဉ်မှူးသည်အသက်ရှင်နိုင်ဖြစ်သင့်သည်ပျော်မွေ့သောသူတို့အဘို့အရှာဖွေနေခဲ့ကြသောတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်စိတ်ဝင်စားဖို့အသက်ကို။ မေတ္တာ၊ဂရုဏာနဲ့ကြင်နာမှု။ ရိုးရှင်းသောစောင့်ရှောက်၊ငါ့နွေးထွေးမှုနဲ့ကြင်နာမှု၊လူတွေအတူတကွအဘို့အသာယာသောနှင့်ခက်ခဲ။ နေသောသူတို့လည်းကြင်နာမြင်သူတို့ရဲ့လယ်ပြင်၌အနိုင် နှင့်အတူကိုင်တွယ်လေးနက်၏ရေရှည်ဆက်ဆံရေးတစ်ခါတစ်ရံတွင်။ အနည်းငယ်အသက်-ဤယောက်ျားသို့မဟုတ်တစ်ဦးတစ်ယောက်သောသူများမှာလည်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသက်အရွယ်။ ရှိပါတယ်။ လျှင်သင်သာတစ်ဦးအလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊သင်လိုအပ်ပြင်ဆင်ခံရဖို့အဘို့အသင်သည်အဘယ်သို့ချင်တယ်။ ငါတူဆက်သွယ်ဖို့၊ဝါသနာ၊အထွေထွေအကြောင်းအရာများ၊ဝါသနာ၊သတိပြုရကြမည်ကျေးဇူးပြုပြီးမှအနှောက်အယှက်နှင့်အတော်လေးအန္တရာယ်။ ငါထောက်ခံမှုအားလုံးအသက်အန္တရာယ်ဝါသနာ။ မျိုးဆက်တစ်ဆက်၏ကလေးများနှင့်မြေးလိမ့်မည်ဝမ်းမြောက်နှင့်အတူဝိညာဉ်လောက၏အကြောင်းအတားအဆီးသည်ဖယ်ရှားခံရ-ႏချင်လိမ့်မည်။ အိပ်စက်ခြင်းနှင့်နှိုးလက်ကိုဒေါင်းလုပ်နှင့်ငွေရှာသိ-ဘယ်လိုအကြောင်းလာခဲ့တယ်။ နှင့်အစဉ်အမြဲအတူဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဝမ်းနည်းခြင်း၊နှင့်အတူနာမကျန်းနှင့်ကျန်းမာရေး။ မင်္ဂလာပါ။ ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက် အမျိုးသမီး။ ဒီနေရာမှာသင်မှတ်ပုံတင်နိုင်အပေါ်အခမဲ့မြို့ဆီ-လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်၏ကိုယ်ရေအမျိုးသမီးချိန်းတွေ့ပရိုဖိုင်း။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြီးနောက်၊ဝင်ရောက်ခွင့်ရရန်အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အမျိုးသမီးနှင့်မိန်းကလေးများ၌နေထိုင်သောအခြားမြို့မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း။ မင်းသမီးနှင့်လူကြီးလူကောင်းဘို့၊ အချစ်အတွက်၊နှင့်အခြားသူများများအတွက်လက်ထပ်ထိမ်းမြားအတွက်၊မိသားစုများအတွက်မြို့၊အပျော်အဘို့အအားလပ်ရက်။
အပေါ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ႏ။ ဗီဒီယိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ ။ ဗီဒီယိုစကားပြော ။
ဒသ နှင့်အခြားမြို့ နေ့ဖြစ်နေသောလူအတော်များများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလူတိုင်းအိပ်မက်။ သာ နှင့်အခြားမြို့ကြီးများ၏အ ၊သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်သောသူလူအတော်များများမှစောင့်မျှော်နေကြသည်။ ဤသည်ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးပရိုဖိုင်း။ လျှင်သင်၌စိတ်ဝင်စားကြအခြားလူများနှင့်တွေ့ဆုံ၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုင္မ်ားအခြားဖျော်ဖြေရေး။ ဥပမာအားဖြင့်၊အသီးအသီးရှိ၏"ထိပ်-၁၀၀"အခန်းကဏ္ဍ၊သင်နှုန်းဓာတ်ပုံများမီနှင့်အပြီးစနစ်ထဲမှာအခြားအသုံးပြုသူများ၏။ ထိုကတည်းက၊လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏များလာရောက်လည်ပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ။ တကယ်တော့၊ပင်လျှင်သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်၏ရည်မှန်းချက်ဆိုတော့အားဖြင့်၊သင်မမြင်နိုင်ပါဘူး၊သင်ဘာလုပ်နေ၊ဘာမှမမှာအနည်းဆုံးငယ်လေးတစ်လုပ်။ သို့သော်၊သင့်တော်သောအဖော်တွင်အင်တာနက်ကိုအကြောင်းအများကြီးတွေ့ရှိရန်လွယ်ကူသည်၊နှင့်ငါပြုနှင့်အတူဤလူ။ ပိုထည့်သွင်းခြင်းပရိုဖိုင်းနေ့တိုင်း၊ ထုိင္း သည်အဘယ်အရာကိုသင်လိုချင်တာကိုသင့် အသုံးပြုသူများအတွက်လမ်းလျှောက်မှာအချို့သောအမှတ်၊အချက်အလက်အကြောင်းအားလပ်ရက်ဒီနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦး လွယ်ကူကြောင်းစူးစမ်းနိုင်နှင့်တွေ့ရှ။
ဖြင့်မှတ်ပုံတင်မပါဘဲရက်စွဲများနှင့်အများကြီးပို။ လောလောဆယ်၊လုံခြုံတဲ့ကွန်ပျူတာနှင့်အင်တာနက်အတွက်လူငယ်နှင့်အဟောင်းသည်မရှိသလောက်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်၏လူအပေါင်းတို့အတွက်မြား၏ဘဝအသက်တာသည်အနီးကပ်ဆက်နွှယ်သည်။ သို့သော်၊စရှိတယ်နည်းချက်များအတွက်ဒီဆက္တင္၊ လူအထွေထွေအတွက်၊ပင်သော်လည်းသူတို့သူငယ်ချင်းတွေအများကြီးနဲ့လူမှုကွန်ယက်။ အဆိုပါဆောင်ပုဒ်အများအထီးကျန်ခဲ့ပြီး ၂၁ ရာစုအတွက်။ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အတွက်နွေးထွေးမှု၊မေတ္တာနှင့်အထီးကျန်င္ငံျခားသားမ်ားအဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အမှန်တကယ်ချိန်းတွေ့ထက်ပို ၃၀၊၄၀၊၅၀-၆၀။ အသစ်ကြိုက်များသောဝက်ဆိုက် ဘဲ၊မှတ်ပုံတင်နိုင်၊ရှာဖွေကြည့်ရှု၊နှင့်မှတ်ပုံတင်အတွက်ပရိုဖိုင်။ ဒါဟာမလိုအပ်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်သို့မဟုတ်ချဉ်းကပ်မှုအနက်လူ၊မှတ်ပုံတင်လိုအပ်သည်။ မဆုံးရှုံးရရှာတွေ့၊အခမဲ့ဆိုက် အသိပညာဤသည်မြို့တမြို့အနီး၊-။
သင်မှတ်ပုံတင်နိုင်ဆိုက်တာဝန်ခံ၏လုံးဝအခမဲ့။ အသစ်အသိအကျွမ်းရချင်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုအတည်ပြုခြင်းနှင့်ကန့်သတ်ထားပါသည်အဆက္အသြယ္(အဆက္အသြယ္)၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်နှင့်လူမှုဧရိယာ။ ကောင်းမိန်းကလေးများနှင့်တွေ့ဆုံရန်အတွက်အဆက္အသြယ္လုံးဝအခမဲ့အဘို့။ မရှိကန့်သတ်အရေအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များဖြစ်ကြောင်းအတုအကောင့်အသစ်များအတွက်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စာပေးစာ။ ဤအရေးဆက်ဆံရေးများအတွက်ဒီစနစ်အတွက်အသီးအသီးတစ်ဦးချင်းနိုင်ငံသား။ ဖြစ်နိုင်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်တစ်က်ဘ်ဆိုက်၊အရာလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ အသစ်အသိအကျွမ်းမှကန့်သတ်ထားပါသည်ဆက္အသြယ္(အိုကေ)နှင့်ဆက်သွယ်ရေးစကားပြောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဧရိယာ။
။ တစ်ဦးချင်းစီလေလံအမှတ်အဖြစ်ဝယ်ယူရန်တစ်ဦးအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်များဝယ်ယူမှုကိုတိုးချဲ့နှင့်ပြီးခဲ့သည့်ကြိုးပမ်းမှုအတွက်ရွေးချယ်ထားသောကာလအတွင်းဝယ်ယူ။ ပုဂ္ဂိုလ်အသုံးပြုသူများသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အဓိကအစာမျက်နှာတည်ရှိပြီးသော၊သာတစ်ဦးထင်ရှားသောအရပ်နှင့်မည်သူမဆိုပူးပေါင်းနိုင်။ မည်သူမဆိုသွားနိုင်ပါတယ်နှင့်ဆွေးနွေးချက်အတွက်။ အခြားတမန်ကြောင်းဖိတ်ခေါ်ရင်းနှီးသောအကြောင်းအရာသို့မဟုတ် ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်သဘာဝ၊တားမြစ်ကြသည်၊နှင့် ၊၊"ခု"အကောင့်အသစ်များပြောင်းလဲသွားကြသည်။ အမှုအတွက်အချိုး၏ဒီမူဝါဒကိုပြန်အမ်းငွေများကျပုဂ္ဂိုလ်အဆင့်အတန်းဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုလိမ့်မည်တားမြစ်။ လျှင်သင်ချိုးဖောက်ဤမူဝါဒ၊ကြှနျုပျတို့သညျပြန်အမ်းလိမ့်မည်သင်သည်သင်၏ပိုက်ဆံသို့မဟုတ်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုရပ်ဆိုင်း။ တစ်ဦးချင်းစီလေလံအမှတ်အဖြစ်ဝယ်ယူရန်တစ်ဦးအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်များဝယ်ယူလိမ့်မည်တိုးချဲ့ဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်ကြိုးပမ်းမှုအတွက်ရွေးချယ်ထားသောကာလ။
ချိန်းတွေ့ပဲရစ်တွင်နိုင်တစ်စိန်ခေါ်မှုအတွေ့အကြုံ၊ဒါပေမယ့်လည်းမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပျော်စရာ။ ပြင်သစ်အချစ်ဖို့ရောခဲ့လျှင်သင်မှန်သင့်ရဲ့ကတ်များ၊သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကခရီးဦးကြိုပြုတော်တော်များများဘယ်နေရာမှာမဆို:အ ၊တစ်ပါတီ၊တစ်၊နှင့်၊ဤအမှု၌၊အဘား။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရဖို့တစ်ပိုင့်သို့မဟုတ်လောင်းအခြားစပျစ်ရည်ဖန်၊ဒီနေရာမှာပထမအတွက်အသစ်တစ်ခုစီးရီးအကြံပေးချက်များနှင့်အတူယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့ရှင်သန်ရေးနဲ့အောင်မြင်မှာပဲရစ်ချိန်းတွေ့မြင်ကွင်းတစ်ခု။ ကျွန်မဖတ်တာနဲ့ပြင်သစ်အမအတွက်အရက်ဆိုင်မှငါ့အတွေ့အကြုံသည်ဤအဖြစ်မှန်၊သို့သော်၊ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်သောပြင်သစ်အမျိုးသမီးများဖြစ်စေခြင်းငှါအနည်းငယ်အအေးနှင့်အဖို့ခက်ခဲကွဲသောဦးဆောင်ခဲ့ပြီးမှဒီသီအိုရီ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို၊ကြောင်းမှန်သည်ပြင်သစ်ဘူးရက်စွဲအစဉ်အလာသဘောကိုဗမာစကား၊သို့သော်ငြားလည်း၊သူတို့ကစားဂိမ်း၏အသှေးနှင့်အကြိုးစားခဲ့နှင့်စမ်းသပ်ပြီးချဉ်းကပ်အောက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်အပေးအသစ်ဖုန္းနံပါတ္မ်ား။ မှတ်ချက်၊ဤလမ်းညွှန်သည်လျော့နည်းများအတွက်ကလပ်အသင်းဖြစ်သော၊ကောင်းစွာပြီးနောက်၊အချို့သောအစောပိုင်းနံနက်ယံ၌နာရီ၊စိမ္းဖြစ်ပျက်ထက်ပိုပြီးအလွယ်တကူအစည်းအဝေးတစ်စုံတစ်ဦးချိန်းတွေ့နှင့်အတူအလားအလာ။ အောက်ခြေမှာဖြစ်ကြောင်းအထွေထွေအကြောင်းသိကောင်းစရာများနှင့်အများ၏စာရင်း ပရော-ဖော်ရွေ။ ကသောကြာနေ့ညဥ့်အခါ၊သင်ဘာသာျပန္ခ်က္ပေါ်တွင်တင်အချို့သောကောင်းတဲ့အဝတ်ရန်အဆင်သင့်ရရန်အတနင်္ဂနွေနှင့်အတူစတင်ရန်သင်၏လမ်းညွှန်ချက်နှင့်မ့်င္ထား၏ထွက်အချို့အ ရန္ကုန္အေ။ သတိထားမိလားတော့တစ်စုံတစ်ဦးစူပါၡမ်ားအနှံ့။ သင်သည်အဘယ်သို့ပြုပါ။ သင်လိုအပ်သူတို့အားသိစေ။ မဟုတ်လျှင်သင့်ရဲ့ပစ်မှတ်လက်ဆောင်အဖြစ်သာ ၊သူတို့ရောက်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အချို့၏နိမိတ်လက္ခဏာသင်သည်သင်၏ချစ်ဆွဲငင်။ သူကပြောပါတယ်၊သိမ်မွေ့၊မချက်ချင်းခုန်မိမိသွားရာလမ်းသို့မဟုတ် ဆင်းဧင့်၏ဘီယာများ၏ရှေ့မှောက်၌သူမ၏သည်။ သင်အောင်မြင်မှာဂျက်လေယာဉ်ဆံဖျား။ အမ်ိဳးကြပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီးစေ့စေ့၊သို့မဟုတ်သူမရလိမ့်မယ် ။ ထက်ပိုဆိုးဘာမှမရှိဘူးရဲ့တစ်ငရဲကြ်န္မမျက်စိသည်သူ၏သားကောင်။ ငါများသောအားဖြင့်အထင္လဲြရှောင်ကြဉ်၌ရှာဖွေနေကောင်လေးရဲ့ဦးတည်ချက်အခါငါခံစားရအောက်တွင်သူ၏စိတ်ကျေနပ်။ ကြည့်သူမ၏ဦးတည်ချက်ရံဖန်ရံခါ၊သူသတိပြုမိလိမ့်မည်ကိုရွေးချယ်သို့မဟုတ်မဖြည့်ဆည်းသင့်အကြည့်။ အမျိုးသမီး၊သင်အာရုံတစ်စုံတစ်ဦးစစ်ဆေးနေသင်သည်ထွက်ကြိုးစားရဖို့ကောင်း၏ကြည့်အပေါ်လိမ်လျှင်မြင်ရဖို့စိတ်ဝင်စားစေခြင်းငှါအလိုလဲလှယ်ကိုတွင် တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူသင့်ရဲ့ရင္း။ ပြီးတာနဲ့မျက်စိဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး၊ကိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့အကြည့်အဘို့အရမ်းရှည်လွန်းမဟုတ်၊အကြောင်းပထမဦးစွာတဦးတည်း။ ကွာကြည့်ရှုပြီးရင်မိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းနှင့်အမီလိုက်ရန်ကြိုးစားသူမ၏မျက်စိသည်နောက်တဖန်။ ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပယ်ရှားသင်ရှိသည်လိမ့်မယ်ဖမ်းဆီးရမိသူမ၏အကျိုးစီးပွားနှင့်စတင်အရွံုး။ အခါသင်သိမ်းဆည်းရမိသူမ၏မျက်စိဒီစက္ကန့်အချိန်၊သင်သော့ခတ်နိုင်တယ်၊သူမ၏အကြည့်အဘို့အနည်းငယ်ပိုရှည်။ ဤအချိန်တွင်၊အမျိုးသမီးပေးချင်စေခြင်းငှါအပြုံးတစ်ခု၊ဒါကြောင့်ဖြစ်သင့်အဖြစ်သာအသေးစား။ သူမမရှိပါဘူး၊လူကိုအနိုင်မပေးရသေးသေးလိမ်အၿပံဳး။ အလွန်သေးငယ်သည်၊ဒါပေမယ့်လုံလောက်တဲ့သူမ၏အဘို့မြင်မှသင်အမှန်ပင်စိတ်ဝင်စားကြောင်းပထမဦးဆုံးအချက်မဟုတ်ခဲ့။ မျှော်လင့်သူထို့နောက်ပြန်သင့်။ သူသည်ကျွနု်ပ်လျင်မြန်စွာကွယ်ပျောက်မပါဘဲပြုံးကြောင်းဖြစ်ကောင်းနည်းလမ်းများတက်ပေးသင့်ပါတယ်။ သို့သော်၊သူမနှင့်တွေ့ဆုံသင့်အကြည့်တစ်စက္ကန့်အချိန်၊နှင့်စောင့်ရှောက်တစ်စက္ကန့်အဘို့၊ပင်မရှိဘဲအၿပံဳး၊အဲဒီအတိအကျအလားအလာ။ သူမသည်အနိုင်ကစားနည်းနည်း ၊သူမကပင် လျစ်လျူရှုသင်အနည်းငယ်အစဉ်၊ပေးသောအချိန်မှအစီအစဉ်၏နောက်ရွှေ့။ ကောင်းပြီ၊သင်ဘာသာျပန္ခ်က္ခု စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသူတို့ဆွဲဆောင်မှုရှိစေခြင်းငှါအပြန်အလှန်ဒါပေမဲ့သူသို့မဟုတ်သူသည်သင်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်ကပ်ဖြတ်ပြီးအခန်းသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့နေတဲ့အခံ၏။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ လျှင်ယ့်ကိုသင်တို့အားစကားပြောစေချင်တယ်၊သူမတွေ့ပါလိမ့်မယ်တစ်လမ်းမှအခမဲ့မိမိကိုယ်ကိုတက်။ ဒါဟာယူစေခြင်းငှါအနည်းငယ်အချိန်၊ဒါကြောင့်စိတ်ရှည်ရှည်ဖြစ်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်၊ကိုယ်တိုင်အလွယ်တကူလက်လှမ်းမီနှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်၊အနည်းငယ်ပိုမိုနီးကပ်သည်အဘယ်မှာရှိ။ လဖိုင်သင့်လစ္ေရေချိုးခန်းသို့မဟုတ်ကိုပူဇော်ရန်အဘို့အသွားလာမည့်ပတ်လည်အချိုရည်။ လျှင်မသွားဖို့ပဲရစ် ၊မလိုက်နာသူမအပေါင်းတို့သည်လမ်းရှိနေရာကိုယ်လမ်းကြောင်းကိုအတွက်သူမ၏ပြန်လာ။ ငါခဲ့ကြအံ့သြ ပြင်ပတွင်ရေချိုးခန်းအပေါ်အများအပြားအခါသမယတွင်၊နှစ်ဦးစလုံးပျော်ရွှင်အံ့သြဖွယ်အားဖြင့်မ့ချင်ပါတယ်ကစားနည်းနည်းကြောင်နှင့်မောက်စ်နှင့်အတူ။ သို့သော်၊တစ်ချိန်ကငါသည်ထွက်ရေချိုးခန်းတင်းကုပ်များတစ်ခုမျှသည်-လွန်း-ဘုံပဲရစ်ညွှတ်ရေချိုးခန်းနှင့်အလာနှင့်အတူမျက်နှာဤကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောသောကောင်လေးင့်မျက်စိကျခဲ့ကြကျွန်မကိုအနှံ့ကနေဆိတ်ငြိမ်။ သူသည်မုချအောင်မြင်မှာအံ့သြစရာအချက်တစ်ချက်သော်လည်း၊ဆင်းရဲဗီးသာနိုင်"ဟုပြောကြသည် လှပသော"ဗမာထဲတြင္နိုင်ဘူးပင်မေးဖို့အဘယျသို့အကြှနျုပျကိုငါ့နာမကိုတာ္ဖုန္းနံပါတ္။ ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက် နှင့်အပြုံးမှာအသီးအသီးအခြားအားဖြင့် ရှည်လျားသောနှုတ်ဆိတ်နိုင်သည့်အသာနားထောင်ငါ့အားဖြင့်ပြော နှင့်ချော်ပြန်ထပ်။ ဆိုရင်ကံကောင်းခြင်းအတွက်၊သူမရှိသည်လိမ့်မယ်အဘားအဲဒီအစား၊တစ်ဦးပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်အများကြီးပိုဘေးကင်းရာအရပ်မှစကားလက်ဆုံတက်ဒဏ်ခတ်မျှော်လင့်အတွက်အပြန်အလှန်ပြောပြီဘာသာစကားဖြစ်တယ်။ ကောင်းစွာ၊ရုံတစ်လိုင်းတည်း။ ေပဲရစ် ၊ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေဖို့၏မွတ္သားကောက်-အပွင့်လိုင်း၊မိန္းမသူမလာလျှင်သူမဒီမှာမကြာခဏ"သို့မဟုတ်သူမရှိပါတယ်အချိန်။ သင်ပြုသမျှကို၊မကြေညာသင့်ပျောက်ချစ်သောသူသို့မဟုတ်ကြည်ညိုလေးစားပထမဦးဆုံးလိုင်းများတွင်။ သင်မသိရပါဘူး၊သူမ၏လမ်းမရှိမယ့်သင်နှင့်အတူမေတ္တာ၌သူမ၏သေး။ တူစိုက်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော၊ပေးလှူလည်းအများအပြား ၏မေတ္တာညာဘက်လင်းနို့ဖြတ်နိုင်ပုံပေါက်ကယ့်ကိုအပေါ်ယံသို့မဟုတ်လွန်းစိတ်အားထက်သန်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊သင်ပြောပြချင်ပါတယ်ခဲ့လိုစကားပြောကတည်းကတြ၊ကၡမ်ား။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဲ့သို့အနည်းငယ်မော့သည်၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ချင်ပါဘူးနစ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊သင်ရုံပေးခြင်းအားသူမ၏အထက်လက်အရင်ကထင်၊သူမ၏အစွမ်းကုန်ဆည်းညာဘက်လင်းနို့ဖြတ်။ အမျိုးသမီး၊သင်ခံစားနေရတဲ့အပြုသဘောကောင်လေးအကြောင်း၊ပွင့်လင်းဖြစ်ဖို့သူဦးဆောင်။ ဆင္းရှက်၊သင်သည်သင်၏ကြိုးစားအားမပေးချွတ်အအေးပခုံး။ သင်မယ်နှစ်ဦးစလုံးကိုယ်ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတူပြုံးနဲ့လဲလှယ်အချို့ဖော်ရွေသောစကား။ ပြင်သစ်အမျိုးသားများအလွန်အမင်း ၏မကြောက်ပါနဲ့ဒီဒါပေမယ့်မှတ်မိဖို့ယူသူတို့၏စကားသည်နှင့်အတူအချို့သောတိ။ သဃစကားေျမှာသူမ၏အဘားတန်းကို၊ပူဇော်ဖို့အသောက်။ သငျသညျဆိုပါကပြန်လည်တွေ့ဆုံဖြစ်ခဲ့ပြီးအခြားအစိတ်အပိုင်းများ၊ဘားနေဆဲ။ တစ်နည်းနည်းဖြင့်၊သင်အမှတ်ရပါဖြစ်ခြင်းများအတွက်လူကြီးလူကောင်း၏မူလည်းရှည်၏။ ေနိုင်ငံခြားပါဘူး၊ပြင်သစ်ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုပြီး၊ဒါကြောင့်ဝတ်စုံကိုနောက်သို့လိုက်လျှင်သင်ဂိုးသွင်းချင်ကိုယ်စားလှယ်တဦး။ တစ်ချိန်ချိန်သင်လိုအပ်မယ့်လုပ်နေဆုံးဖြတ်ရန်သင်ဘာလိုချင်ထွက်၏။ လျှင်သင်အဘို့အရှာဖွေနေခဲ့ကြအနည်းငယ်အရေးယူ၊သူမ၏အခြားအသောက်(နှင့်အခြား)။ ဒါပေမယ့်လို့မရပါကသူမ၏ကြည့်ဖို့အဘို့နောက်တဖန် အိမ်၊စကားသွားအဖြစ်ကြာမြင့်စွာကဟန်အဖြစ်သဘာဝအလျောက်။ အကောင်းဆုံးကတော့သင်ရှာတွေ့စေခြင်းငှါအရာတစ်ခုခုအတွက်သုံးသောအသုံးပြုနိုင်တယ်ကဲ့သို့အကြောင်းရင်းအတက်တွေ့ဆုံရန်အမြန်ဆုံး:တစ်ဦးကဖျော်ဖြေပွဲရုပ်ရှင်၊တစ်အသစ်ခေတ်မှီဘားသင်ချို့တဲ့ခဲ့တာထွက်ကြိုးစားဖို့။ အားလုံးသည်ကောင်းမွန်သောအခြေဖလှယ်ဖို့နံပါတ်များ၊သင်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်။ ပြင်သစ်အမျိုးသားအားမကြာခဏမဟုတ်ပါဘူးအလွန်အမင်းရှက်ဖို့ရုံရှေ့ဆက်သွားနှင့်အကြံပြုအစည်းအဝေးတက်လသပြိုကွဲလုနီးနီး။ မင်းမပထမဆံုးစကား၊မဟုတ်လျှင်၊သင်သဘောပေါက်သင့် အရ-သွား။ အလွန်ကြီးစွာသော၊အခုသင်ရတယ်သူမ၏အရေအတွက်ကို၊သင်သည်အဘယ်သို့ပြုပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ဒါပေမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရပြောရမယ်၊ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့အမည္စောလွန်းသို့မဟုတ်နောက်ကျလွန်း။ ငါလက်ခံရရှိစာသားမက်ဆေ့နီးပါးချက်ချင်း။ မကောင်းတဲ့စိတ်ကူး။ ဒီပြသင့်သန်လွန်း။ သူမထင်းရှူးကျော်သင်အနည်းငယ်။ မဟုတ်လျှင်သင့်ရဲ့အကြံပြုချက်ခဲ့ကြည့်ဖို့အသီးအသီးအခြားအနက်ဖြန်နေ့၌(အခြားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကူး၊ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်သည်လိုအပ်ခင္ဗ်ားဟာမြို့မှာတနင်္ဂနွေအဘို့၊ဥပမာအားဖြင့်)သူမအမည္အဘယ်သူမျှမအလျင်-နာရီကြာလေပိုကောင်းလေမီ နာရီ။ သင်ပြုသမျှကို၊မစောင့်ပါနဲ့တစ်ပါတ်ထက်ပို။ မိန်းကလေးများသာအချိမျှကြာမြင့်စွာအဘို့၊တစ်ပါတ်ပြီးနောက်၊ကျနော်တို့စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်စိတ်ဝင်စားရှာနေစတင်။ တခါကျွန်မအောင်မြင်မှာအားလုံးအထက်ပါအဆင့်များနှင့်အတူဤချစ်စရာပြင်သစ်ကောင်လေးခဲ့ချင်ပါတယ်အမြင်အာရုံရောပမှာအစည်ဘား၊ငါသွားရာလမ်းကိုရဖို့အသောက်မှာဘားငါအထင္လဲြတိုက်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၌ပြန်ထားပေါ်လမ်းလျှောက်(အပိုဆောင်းအောင်မြင်သောအစွန်အဖျား။)။ ငါတီပင်ရှိသည်ဖို့အချိန်နေရာငါ၏အမိန့်ကိုငါကြည့်ကျော်မှသူ့ကိုရှာတွေ့ကျွန်မနားမှာ။ သူကစကားေျနှင့်အတူငါ့အဘို့တောင်းငါ့အရေအစားအလျင်အမြန်ဖြစ်သူကမိမိသွားရာလမ်းကိုအပေါ်ထွက်။ သူကတောင်ကပြောပါတယ်သူငါ့ကိုဖုန်းခေါ်ပေးမည်ကိုအလွန်နက်ဖြန်နေ့၌။ ။ နောက်ဆုံးမှာသူကေပးပါခင္ဗ်ာအမည္နှစ်လအကြာတွင်။ အရာကာက္ရင္။ အဖြစ်အများကြီးငါမုန်း၊ဒီပထမဦးဆုံးမှာ၊အဲဒါကိုကယ့်ကိုအတော်လေးလိုအပ်မပြန်ကြားချက်မှချက်ချင်းအသစ်တစ်ခုကိုစိတ်ကူးယဉ်စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား'မက်ဆေ့အဖြစ်အမြန်ဆုံးသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုကျွန်မကို။ စောင့်မှာအနည်းဆုံးနာရီအနည်းငယ်၊သငျသညျချင်မဟုတ်လျှင်သူတို့စဉ်းစားရန်ရရှိပါသည်လုပ်ဖို့ပိုကောင်းဘာမျှမ ထက်ထိုင်ပတ်လည်ဘို့စောင့်ဆိုင်းနေသူတို့ရဲ့ကျမ်း။ သင်ပြုသမျှကို၊မတရစပ်နှင့်အတူသူတို့ကို၏"ငါစဉ်းစားတယ်"နှင့်"ငါမြင်ဖို့မစောင့်နိုင်ပါ။"ဤမည်သောအားဖြင့်ဖြစ်စေသူတို့မမြင်ချင်။ ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့အတိုကောက်မသာအတွက်ပထမဆုံးနေ့ရဲ့အပတ်ကသို့မဟုတ်ပိုကောင်းသေး၊ပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးအမှန်တကယ်ရက်စွဲအခါဆွဲထားအတွက်သူတို့ကိုသင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကစားရန်စောင့်ဆိုင်းဂိမ်း။ အမျိုးသမီးကဲ့သို့အံ့သြဖွယ်။ ထိုသို့ဖြစ်ဖို့ရှိသည်ပါဘူးကြီးမားတဲ့သို့မဟုတ်ပင်။ ဒါဟာကဲ့သို့လွယ်ကူသောဆောင်ခဲ့ပန်းပွင့်ပေါ်ပထမဦးဆုံး"နေ့စွဲ"သို့မဟုတ်သတိရခဲ့ကြောင်းသိရသည်ယူဗီးသင်ခန်းစာဤသို့ယူမှသူမ၏အဗီးစားသောက်ဆိုင်။ ဤနည်းနည်းအကြံအစည်ရေတွက်များအတွက်အများကြီး။ ထို့နောက်ခဲ့ကြတစ်ချိန်ကသင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကခရီးဦးကြိုပြုခြင်း၊သူတို့ကိုသင်၌စိတ်ဝင်စားမှသူတို့ကိုယူခြင်းအားဖြင့်အဲဒီထဲကအများစုဟာမူရင်းအရက်ဆိုင်များအတွက်။ ကိုယ့်တဦးတည်းအရာ:ပြင်သစ်လူမျိုးလေ့တွဲဖက်ပူဇော်သက္ကာ၊သွန်းလောင်းနှင့်အတူအဆိုျလိင်ရှိသည်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးတစ်လမ်းမှပွင့်လင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုအဖို့ဆွဲဆောင်မှုတစ်စုံတစ်ဦး။ ဒါကြောင့်မရှိသလောက်ဆိုလိုသည်သာငါသိမှရချင်၊ပိုကောင်းသင်သည်။ ဒါကြောင့်ပြင်သစ်မိန်းကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ကောင်လေးပူဇော်သက္ကာတို့ကိုအသောက် ဖြောင့်ကွယ်ပျောက်စေခြင်းငှါငြင်းထဲကတိ။ အများကြီးပြင်သစ်ယောက်ျားတွေရအမျက်ထွက်ခံစားရပါသုံးပြုလျှင်မိန်းကလေးလက်ခံအသောက်သို့အရစကားပြောဆိုမှုနှင့်နောက်ဆုံးတွင်သွားချင်ကြပါဘူး။ သူတို့ခံစားရအတွက်ပေးဆောင်အသောက်ပေးဖို့သူတို့ကိုအချို့သောအခွင့်အရေးရဖို့ပိုပြီးထက်ရုံရွေစကားပြောပါ။ ထို့ကြောင့်၊တစ်ဦးပြင်သစ်မိန်းကလေးတစ်ပိုပြီးအဆင်ပြေဖို့လက်ခံအသောက်လျှင်ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်အစပိုင်းတွင်ဝယ်ယူရန်စီစဉ်တယောက်သည်မိမိထက်ကိုယ့်အတွက်မိန်းကလေးတစ်ဦးလျှင်မသေချာသူမအတွက်စိတ်ဝင်စားအလေးသူမကအမှန်တကယ်လိုအပ်ကိုသိရဖို့သူ့ကိုခင်လက်ခံမှတစုံတခု။ ဒါဟာအနှစ်တစ်နှစ်ကအချိန်နောက်တဖန်အ၊ချစ်သူများ့နေ့ကအစာရှောင်သည်ကိုချဉ်းကပ်ပြီးဒီနေရာမှာအချို့အကြှနျုပျ၏သတင်းများ၊အကြံဉာဏ်များနှင့်ရန်မည်သို့တွင်အကြောင်းသိကောင်းစရာများအတွက်ကြောင့်ပျော်မွေ့။
ရကုန်အံ့ပိုပြီးဖန်တီးမှုထက်အရက်ဆိုင်။ သော်လည်းသူတို့ခံရစေခြင်းငှါအဘယျသို့သင်မှန်မှန်လုပ်ဖို့လိုတိုးချဲ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးနေရာများကိုဖြည့်ဆည်းရန်အမျိုးသားရင်ဒီလိုဖန်တီးရန်တစ်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အကြောင်းအပြည့်အဝအလားအလာ။ ကောင်းစွာအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊သင်ဖွင့်ဖို့အသုံးပြုမှသာထွက်အလုပ်လုပ်တစ်ကိုယ်တော်နှင့်အတူသင့်ရဲ့အိုင်က်ိဳးအတွက်သင်၏နား၊ဒါဟာအံ့သြစရာအားကစားရုံအမမူအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်အထိ။ အ။ သင်ကိုယ်တိုင်စာအုပ်သို့သင်တန်း-သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး၊သူတို့ကိုလုပ်ဖို့ကိုတိုင်းအချိန်သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်း၊ဒါပေမယ့်သင်တန်းတွေအလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်း အသံုးအႏႈန္းလူတို့နှင့်အတူ။ အပိုအပြန်အလှန်သူတို့ပါဝင်ပိုကောင်းအခ။ မရွေးချယ်ဖာင္းတန်း-ရှိပါတယ်အချို့သောအတန်းများအတွက်သာဆွဲဆောင်အမျိုးသမီး။ တန္းတူ"ခြေထောက်၊ပျင်းနှင့်"စေခြင်းငှါမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြ၏ထုပ်ပိုးထဲကနှင့်အတူပုလ်။ နောက်တစ်နည်း၊သင်ရဖို့အနည်းငယ်ဖန်တီးမှုများနှင့်အလန်။ တူတစ်ခုခုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောသောအပြန်အလှန်နှင့်အတူအမျိုးသားနှင့်ရေခဲကိုချိုးဖောက်။ လျှင်ပိုမိုအဆောက်အဦးအမျိုးအစားကြိုးစား၊တစ်ဦးအပြေး။ မြည်းစမ်းကြသည်ဖြစ်ရပ်များသည်အံ့သြဖွယ်အောင်များအတွက်စိုက်ထုတ်စကားလက်ဆုံနှင့်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုမှာအားတွေ့ဆုံရန်ပါဘူး။ ထိုအတူစပျစ်ရည်ကိုအသငျသညျသိသာအပြားရှိသည်ကိုအကြောင်းပြောဆိုနှင့်အဖြုန်းကိုတပြင်လုံးကိုညဦးယံအချိန်နှင့်အတူအခြားဧည့်သည်၊ဒါကြောင့်သင်ဖို့အချိန်များများရှိသည်"အခန်း"နှင့်တွေ့ဆုံရန်လူများ။ လည်း၊ဒါကြောင့်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာညဦးသွားထက်တူညီသောအဖျော်ယမကာနှင့်သောက်သုံးနှင့်အတူအတူတူလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ။ ဒါကြောင့်လိုက်ခြင်းဖြင့်မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်ပျော်စရာရှိသည်ရတဲ့အသံုးအႏႈန္း။ လူတွေအတွက်ပန်းခြံများမှာများသောအားဖြင့်မှာမိမိတို့အအရှိဆုံးစိတ်အေးလက်အေးနဲ့သူတို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးလျှော့ချ၊ဒီတော့ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသော နေရာမှစကားပြောဆိုတက်ဒဏ်ခတ်။ အဲဒီအတွက်သိကျိန်ဆိုသောခွေးလမ်းလျှောက်သည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အကောင်းဆုံးနေရာများကိုဖြည့်ဆည်းရန်အမျိုးသားပန်းခြံအတွက်။ သငျသညျရှိသည်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်၊အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်နှင့်အတူလိုက်သူတစ်ဦးလော၊သို့မဟုတ်ပူဇော်ဖို့သူတို့ကိုချိုးဖျက်နှင့်လမ်းလျှောက်သူတို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သူတို့အဘို့။ သတ္တုတွင်း၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးအဘယ်သူသည်မကြာသေးမီကဝင်ရောက်အတင်းနစ်ကလပ်အကျိန်အားဖြင့်ဒါဟာအဆုံးစွန်လမ်းအဖြစ်ပိုပြီးယောက်ျားဆွဲဆောင်ဖို့သင့်အသက်တာ၌။"ကြီးမားတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်"သူမကပြောပါတယ်၊"အကြောင်းတင်းနစ်ကလပ်အသင်းမဟုတ်ကြောင်းကိုတကယ်တင်းနစ်"။ ကြီးစွာသောအရာကအားကစားကလပ်အသင်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်ကသင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအနေဖြင့်၊သင့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းများ၏သူတို့မိသားစုနှင့်ပျော်ရွှင်စွာမှသွားမည်သည့်သူတို့၏အားလပ်ရက်လူမှုအဖွဲ့နှင့်ညစာစားပွဲအထူးသဖြင့်ကောင်းလျှင်အားကစားအမ်ိဳးအစားနွင့္အဘို့ကြီးသောချဲ့ထွင်သင့်ရဲ့လူမှုရေးစက်ဝိုင်း။ သာတအာရုံ၊ဟာသအသားရဲပျက်တော့မဟုတ်ကြောင်းတစ်နေရာရာမှာစကားပြောနိုင်အပေါင်းတို့သည်အချိန်ဖြစ်ပျက်။ သို့သော်၊အမြဲရှိပါတယ်အာမခံခံရဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအထီးမှအမျိုးသမီးအချိုးမှာနေရသကဲ့သို့ဟာသ၊ကိုရွေးချယ်ပါနှင့်သင်၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးလွယ်ကူသောကြောင့်ဖွင့်ဖို့လုံလောက်တဲ့အချို့စကားလက်ဆုံဘားမှာအားလပ်ချိန်အတွင်းမှာ။ အကောင်းဆုံးကတော့၊သင်သွားချင်မှ အနုပညာ-အခြေခံပြီးအပျက်အကြောင်းဖွင့်လိုက်အားဖြင့်အချိုရည်နှင့်ပွဲတော်၊ဒါကြောင့်များသောအားဖြင့်တစ်ဦးဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ်အပြခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အနုပညာရှင်များအဘို့အကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်သာတစ်ဆိုင်၏ယောက်ျားနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရရှိနိုင်ပါ၊ဒါပေမယ့်လည်းစုံလင်စွာလက်ခံစေဖို့စကားလက်ဆုံနှင့်အတူမည်သူမဆိုအောက်ပါလမ်းညွှန်အကြောင်းပြောနေတာ၏"အလုပ်"။ အခြားကိုသိရှိခြင်းထက်အကောင်းဆုံးနေရာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အမျိုးသားများအတွက်၊သင်ရုံတက်ပြသပြီးအဘို့အစောင့်ဆိုင်းဖို့သူတို့ကိုသင်တို့ဆီသို့လာ။ သင်သိရန်လိုအပ်၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုအထီးစိတ်ကိုဘယ်လို၊သူတို့ကိုဆွဲဆောင်ဖို့သူတို့ကိုဖြစ်စေချင်တယ်။ ဤသည်အဘယ်အရာကိုသင်လေ့လာသင်ယူကြလိမ့်မည်အတွက်ထားခဲ့ပါ။ ဘရန်မေးခဲ့သည်မှာစကားပြောဖိုဒ်တက္ကသိုလ်၏ဘာသာရပ်အပေါ်အချိန်းတွေ့၊ခံရပြီးနောက်ထင်ရှားပေါ်လျှို့ဝှက်မင်းသ။
အဘယျသို့ဆန့်ကျင်သင်ထင်စေခြင်းငှါ၊၊မျှရှားပါးမှုရှိ၏အကောင်းသို့မဟုတ်အလေးအနက်လူတွေသင်တို့အဘို့အကြောင့်၊မြေကြီးပေါ်မှာသူတို့လုံးဝနေရာတိုင်း။ သာကမဟုတ်တဲ့သူတွေပေါ်လာ၏၊ဘယ်မှာသောသူတို့တည်း။ အဆိုပါပြဿနာကိုများအတွက်အမျိုးသမီးများစွာသည် အလမ်းကိုသူတို့ထင်ကြောင်းချိန်းတွေ့ခွင့်မပြုပါဘူးချင်သူယောက်ျားအသက်ရှင်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးပုံပြင်နှင့်အတူသူတို့ကိုပြောဖို့သူတို့ကို။ သင်တွေ့ဆုံသည့်အခါအဘယ်သူလူတစ်ဦးအကောင်းဆုံးသင်သည်အကိုက်ညီ၊သင်ရွေးချယ်ဖို့နှစ်ခုရှိတယ်:ပထမဦးဆုံး၊ပိုပြီးချိန်း(ပါလိမ့်မည်ဆိုလိုတာကိုပြောင်းလဲသင့်ရဲ့အလေ့အကျင့်)၊နှင့်ဒုတိယအ၊သင်သည်အဘယ်သို့ရှာဖွေနေပါသည်၊"ကောင်းသော-ရှာဖွေနေကောင်လေး"ဖြစ်ပါတယ်၊သင်တို့အဘို့အပြီးဖို့အခမဲ့ခံစားရဆက်ဆံရေးအဆုံးသတ်လျှင်သင်ခံစားရကြောင်းသင်၏အလိုဆန္ဒကြသည်မန္နီေ။ ဒါဟာအချိန်အကြာ၊ယူဒီမှတ်ချက်ခွင့်အလမ်းအဖြစ်ဂုဏ်ပြုတဲ့အပေါ်သင်၏အလုပ်။ ကျွန်တော်ဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်သင်သည်အဘယ်သို့ပြုသူတွေအတွက်သင်အတိုင်းလိုက်နာ။ ငါချင်ပါတယ်ထာက္နာျခင္းအပေါ်ဒီဗီဒီယို၊မု (ငါသည်မသိရပါဘူးသင်သည်ဤသိလျှင်)။
ချိန်းတွေ့သောဆိုဒ်များအသုံးပြုမှုအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ငွေပေးချေဝန်ဆောင်မှုအခမဲ့။ အားလုံးအဓိကအင်္ဂါရပ်ရရှိနိုင်မှာနေကြတယ်လုံးဝအခမဲ့။ တစ်ခုတိုးချဲ့ထားသာဓကများလည်းရရှိနိုင်ဘို့ရှာမြန်မာဘာသာအတွက်အဓိကမြင့်မားသောပရိုဖိုင်း၏အမူများမှာဓာတ်ပုံသင်ပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်အခမဲ့အတည်ပြုများ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းအီးမေးလ်ကနေတဆင့်ဆိုက်ကနေ။ လည်းရှိပါတယ်တဲ့ရိုးရှင်းသောခေါင်း။ န့ချိန်းတွေ့ကွန်ယက်အတွက်ရုရှားနဲ့ ထက်ပိုပြီး ၄၀ သန်းပရိုဖိုင်းအတွက်တစ်ခုတည်းဒေတာဘေ့စ။ ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာအသုံးပြုသူများသွားရောက်ကြည့်ရှုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေနေ့စဉ်၏အမြို့မြို့အမော်နှင့် ။ ဘတ်။ ။ ဘတ်၊၊ယန်၊အႏွဳန္း၊၊၊ ၊၊၊၊၊၊၊၊၊ချယ်ကော်ရိုဘတ်၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊နယ္စပ္မ်ား ၊၊၊၊၊တွိုင်းမေ့ဖွယ်အတွက် ၊၊င့္လဲ၊၊၊ စာမျက်နှာများတွင်၊၊မော်စကို၊ နှင့်အခြားမြို့များ၊ဗလာဒီမာ၊တပ်၊ နှင့်အခြားသူများ။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်တည်ရှိပြီးအနီးအသံုးျပဳသူမ်ား၊မဟုတ်လျှင်သင်ဖန်တီးမြေပုံများမျှဝေ။ ဤအမှု၌၊သင်ထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာသင်သာအသုံးပြုသူအပါအဝင်အနီးအနားနေရာများ။ ရှိပါတယ်အပိုဆောင်းသောအမှုအရာပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ လည်း၊သင်အဘို့အရှာဖွေနေစုံတွဲတစ်တွဲ၊မစောင့်ပါနဲ့၊သို့သော်အများဆုံးရှောင်ရှားသုံးပြုသူများမှာစားပွဲနှင့်ဟောပြောသောသူတို့အဖို့"ရှိပါတယ်"။
ပြင်သစ်စကားပြောခန်း၊ငါပြောသောဤပြင်သစ်စကားပြောခန်း တကယ်ကိုအကောင်းဆုံး၊တစ်ချက်တင်အခန်းတစ်ခန်းသို့မဟုတ်အပြည့်အဝမိန်းကလေးငယ်များချိတ်ဆက်ဖို့သူတို့ရဲ့ကမ်၊အခြားသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ ငါဖိုင်အနည်းငယ်ပြောပြနိုင်သောအနာ၊ အရာအများဆုံးမိန်းကလေးငယ်များ၊ပတ်ပတ်လည်နှစ်ဦးမှနှစ်နာရီပြီးမကြာခဏ။ ပြောကြတဲ့အခါအာဖို့ပြင်သစ်အမျိုးသမီး၊သင်အမြဲဤအဘို့အမေးသို့မဟုတ်သည်:"သင်၏ဖစ္သျဖင့္"ဤအဟောင်းပုံပြင်၏ဤ ၊သင်ကရန်မလိုအပ်ပါအဘယ်ကြောင့်မေးသင့်ကင်မရာအလျောက်လှည့်ပေါ်၊ယခုသင်ရုံရှိသည်ဖို့မကြိုးစား ၊ဒါပေမယ့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်လမ်းတပုဒ်မှရခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါရေးလိုက်ဤသည်စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်တွင်၊ငါ၏ဤအမျိုးကိုအပေါ်-ကင္မရာဖစ္သျထိုက်အနည်းဆုံးရှစ်၊ ဒါပေမယ့်အရာကိုအဘယ်သို့ဆုံးဖြတ်အဆုံးရလဒ်အဖြစ်နောက်ထွက်ကြိုးစားနေဒီဒဏ္ဍအာ ေ။ ဒါပေမယ့်သတိထားရမလဲဘန်ကီမွန်း၊အဘယ်သူမျှမကအခြားရွေးချယ်စရာ၊ဒါပေမယ့်ဒါဟာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တစ်ဦးအနားယူရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပေါ်တွင်ပထမဦးဆုံးအရပ်။ ကောင်းဆွေးနွေးတြပါ။
အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးရိုးရှင်း:သင်ကသင့်ရဲ့ကြော်ငြာဖန်တီး၊ထို့နောက်သင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်တစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်အတူအဘယ်သူသင်အချစ်မျိုးဆက်သို။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အသီးရှာနေသူသည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဘို့အမှန်ချစ်သူ၏အသက်တာ၏၊အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးက၊ချိန်းတွေ့၊သှေးဆောငျသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းတဲ့၊ဤသည်ဆိုက်ကိုသင်တို့အဘို့။ ထိုမေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်ဤချိန်းတွေ့ တကယ်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်၊ဒါကြောင့်သင်ဆုံးရှုံးဖို့ဘာမှမများ။ ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်မထည့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်။ သင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဒါကြောင့်သင်ပြန်လာမကြာခဏနှင့်အတူလူသစ်ဖြည့်ဆည်း။ အပေါ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်ကိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်များတက်လက်မှတ်ထိုးရန်အတွေ့အသက်ဝိညာဉ်-ညီအစ်မ၊ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်အဘယ်သူကိုနှင့်အတူမျှဝေဖို့အသက်အားဖြင့်၊ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးအလုပ်အစည်းအဝေးအင်တာနက်ပေါ်မှာအများဦးဆောင်လိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးမှရေရှည်တည်တံ့သော၊သဟဇာတဖြစ်သော၊မင်္ဂလာနှင့်ပြည့်စုံဆက်ဆံရေး၊သို့မဟုတ်တောင်မှမင်္ဂလာဆောင်။ မှာအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ကျနော်တို့ယူတိုင်ကြားမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အလွန်အလေးအနက်။ အပင်ပိုပြီးထိရောက်၊ကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီတိုင်ကြားခင္းလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင်းသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်များ'မွတ္ခ်က္မ်ားဖြစ်ကြောင်းအကောင့်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးသူတို့အထောက်အကူတိုးတက်မှု၏။ အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်စေရန်အလေးအနက်အသိပညာအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ နှင့်အတူတစ်ဦးအားကြီးသောအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကြီးထွား၊သင်ဖြစ်နိုင်တစ်ခုနှင့်အတူအဘယ်သူသင်မျှဝေနိုင်ပါသည်အရာအားလုံးကို။ ထို့အပြင်၊ဒီအအလေးအနက်နှင့်အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုက်၏အားသာချက်ရှိပါတယ်ရာပူဇော်သက္ကာကို၎င်းမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုမှဤသူအပေါင်းတို့သည်အဖွဲ့ဝင်များ။ ဆွဲနိုင်ရန်အတွက်အာရုံစိုက်ဖို့အသင့်ပရိုဖိုင်းကို၊သင်ပင်စံချိန်တင်အသံဖိုင်နှင့်ဗီဒီယိုထုတ္ျ။ ငါတို့သည်ပူဇော်အခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုကဲ့သို့သောလက်ငင်းစာတိုပေးပို့၊ခတ်၊တိုးချဲ့ရှာ၊ကိုယ်ပိုင်ပရိုဖိုင်းနှင့်အများကြီးပို။ လျှင်သင်ပုံစံမျိုးဆောက်လုပ်ဖို့ထိုက်ဆက်ဆံရေးကို၊သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ရှာဖို့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊နှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်အတူအလေးအနက်အသစ်အပေါ်လူတွေအင်တာနက်ကိုသှားသို့မဟုတ်ပဲသင့်ရဲ့ပျင်းနှင့်မွှန်းကောင်းမွန်သောဟာသနှင့်အတူအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်။ အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုခံစားကြည့်ပါအကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့ပြင်သစ်နိုင်ငံက၊နှင့်အပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့အွန်လိုင်းအတွေ့အညာဘက်ကိုယောက်ျားမိန်းမအတွက်တိရစာန်၊မိတ်ဆွေများကို၊ရည်းစား၊ချိန်းတွေ့၊မေတ္တာ။ ဒါဟာအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေ။ သင်ရနိုင်ကျွမ်းနှင့်အတူလူသစ်ဖြည့်ဆည်းနေ့တိုင်းနှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်။ သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ကြီးမားသောနံပါတ်များ၏အနက်တစ်ဦးတစ်ယောက်မှလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့လူများအတွက်ချိန်းတွေ့၊အဘယ်သူသည်အဘို့အရှာကြသည်နှင့်အဘယ်သူတူညီတဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရှိသည်ဖြစ်သင်အင်တာနက်အပေါ်:တစ်ဦးကိုရှာဖွေချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊လေးနက်၊အချစ်ဇာတ်လမ်း၊ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်။ မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်ပြင်သစ်(။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ပြင်သစ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်အခမဲ့။ ကဲ့သို့သင်တို့အလိုဖြည့်ဆည်းဖို့ပြင်သစ်တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်ပြင်သစ်၊သို့မဟုတ်တစ်ဦးတစ်မျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများ? အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်။ အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်စကားပြောပြင်သစ်ချစ်ကြည်ရေးကလပ်အခမဲ့ဖြည့်ဆည်းဖို့တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်ပြင်သစ်၊အမျိုးသမီးများကိုသို့မဟုတ်ယောက်ျားပြင်သစ်နှင့်နိုင်ငံတကာမိတ်ဆွေများအားလုံးမှ။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်အပေါ်ပြင်သစ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကလပ်ဖန်တီးသင့်ပရိုဖိုင်းကိုနှင့်သင်ချက်ချင်းရာက္ၾစာရင်းတွေ့ဆုံပြင်သစ်အပေါင်းတို့၏အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတွေကိုငါတို့သဆိုက်၏။ မိန်းမရှာကြံယောက်ျားများအတွက်ဆက်ဆံရေးမေတ္တာအသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်လူရှာကြံအမျိုးသမီးများအတွက်ချစ်ကြည်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်း။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ချောင်းများမှာပြင်သစ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်အခမဲ့ကနိုင်ငံတကာကွန်ရက်စာမျက်နှာများအတွက်ချစ်ကြည်ရေးချိန်းတွေ့အောင်တစ်ဦးတစ်ယောက်အကြားပြင်သစ်နှင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေခြင်းငှါအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်ပြင်သစ်ကြောင်အဆုံးစွန်သောအခမဲ့ချိန်းတွေ့အသစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်ဆံရေးအပေါ်အင်တာနက်နှင့်အတူဖလှယ်အပေါ်။ ကြုံတွေ့၌ချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်ချစ်ကြည်ရေးချိန်းတွေ့အခမဲ့ ချိန်းတွေ့ဆိုက်အပေါ်ပြင်သစ်အခမဲ့။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်။ မိန်းကလေးများတွေ့ဆုံရန်နှင့်အမျိုးသားများမှပဲရစ်၊عینک آفتابی زنانه ليون၊၊၊ခ်၊၊၊မြည်၊၊အယ်လ်ဆပ်၊၊၊၊ကြံ၊၊၊အကြင်ဓာတ္ျ၊တစ်စ၊။ စတင်စကားပြောအခုအခမဲ့နှင့်အရေးရုံနှင့်အတူန့်အသတ်။
Руски рулет разговор-marya_iskisnika-LiveJournal
အဘို့အချိန်းတွေ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ အွန်လိုင်းချက်တင်ကစားတဲ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့နှင့်အတူမိန်းကလေးမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ချိန်းတွေ့မပါဘဲဓါတ်ပုံများ ဗီဒီယိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ၾကာင္း အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင် လိင်နှင့်ချိန်းတွေ့ လိင်နှင့်ချိန်းတွေ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအခမဲ့ဗီဒီယို ဗီဒီယိုချက်တင်အခန်းပေါင်းချိန်းတွေ့